မိတ်ဖက်ထိုးဖောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုသည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းအဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ” (၂၀၂၁၊ လိင်ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာန၊ Chandos ဆေးခန်း)
ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများစွာကသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေခြင်း (လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုစဉ်ကာလအတွင်းပြdifficultyနာတက်ရန်ခက်ခဲခြင်း) သည်၎င်းတို့၏ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းစွာအသုံးပြုခြင်းသည်ရောဂါလက္ခဏာအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သေခြင်းတရားကိုထိန်းချုပ်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်နည်းလမ်းများပေါင်းစပ်။ ဖြစ်နိုင်သည်။ desensitization ဆုလာဘ် circuit ၏နှင့် sensitized စွဲလမ်းကြောင်း ဤအရာအမျိုးမျိုးသောရောဂါလက္ခဏာတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိပါတယ်
ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ Masturbating "ချည်း" သို့မဟုတ်ခက်ခဲသည်
အစောပိုင်းက porn အမျိုးအစားများသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမရှိတော့ပါ
တစ်ဖက်နှင့်အတူထက် porn နှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားကြုံနေရ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် (s) ကိုအတူကျဆင်းနေလိင်စိတ်နိုးထ
ပါးစပ်လိင်သို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူသုက် (သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းစိုက်ထူကိုထိန်းသိမ်းရန်) မရနိုင်ပါ
၂၀၁၅ ခုနှစ်လေ့လာမှုတစ်ခုအရ hypersexual disorders စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါကုသမှုခံယူသောအမျိုးသားများအနေဖြင့်တစ်ကိုယ်ရေရာဂစိတ်ဖြေသူများ (ပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုဖြင့်) တစ်နေ့လျှင်တစ်နာရီသို့မဟုတ်တစ်နာရီသို့မဟုတ် ၇ နာရီအထက်တွင်လိင်မှုကိစ္စပြproblemsနာများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည် သုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေး 33% အစီရင်ခံ။ သည်အခြားသုတေသီများအဖြစ်ကောင်းစွာပူးပေါင်းလိင်နှင့်အတူအခက်အခဲများနှင့် ပတ်သက်. မေးရန်စတင်နေကြသည်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲလမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှနိမ့်ဦးနှောက်ကို Activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုချိတ်ဆက်လေ့လာရေး။ ဤ ၂၀၁၇ စာတမ်းသည်နှောင့်နှေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုကိုသာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည် (သတိပေးချက် - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဗန်းစကားများစွာ၊ သို့သော်ညစ်ညမ်းဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကသူမ၏လူနာကိုအထောက်အကူပြုသည်ဟုကုထုံးဆရာကကောက်ချက်ချသည်) ကရေတိုရေရှည် psychosexual မော်ဒယ်အတွင်းနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လိုခက်ခဲပါသလဲ တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှုနှိုင်းယှဉ်။ (ဤနေရာတွင်ကောက်နှုတ်ချက်)
သတင်းစာဆရာ Davy Rothbart ဒီလူကြိုက်များဆောင်းပါးအတွက်အော်ဂဇင်ကိုအတု, နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်၏ဘုံပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးသားခဲ့သည်နှင့်အခြားညစ်ညမ်း-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ: သူမည်သူမဆိုထဲသို့ရုံဒါကမင်။ ဤပြဿနာကိုတစ်ဦးပြည့်စုံနားလည်မှုအဘို့ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ post ကိုဖတ်နေအကြံပြု: အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား? ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပုံမှန်မဟုတ်သောဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနည်းစနစ် copulatory erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုအများအပြား desensitized လူအလုပ်ဖိအား (သေခြင်းတရားချုပ်ကိုင်ထား) နှင့်မြန်နှုန်း (အလွန်လျင်မြန်သောလှုပ်ရှားမှု) မကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။
A အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် အလွန်တိုတောင်းသောကာလ၌:
၃ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ရှည်လျားသောဆက်ဆံရေး gf နှင့်မဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ပါ။ သူမကကျွန်မကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ သူမဂရုမစိုက်ဘူး၊ ကျွန်မတို့ရဲ့လိင်ဘဝဟာလျောက်ပတ်ပေမဲ့အဲဒီအားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကဤထပ်ဆင့်ခွဲခြားမှုကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၂ ရက် (၁၃ နှစ်နီးပါး) ကျွန်ုပ်သည်ဤ ၃ လအခက်အခဲကိုစတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပထမရက်သတ္တပတ်ကတော့အိပ်မက်ဆိုးတွေပြည့်နေတယ်။ အိပ်မက်ဆိုးတွေ၊ အနားတွေ၊ တိုက်ပွဲတွေ၊ စိတ်ပျက်စရာတွေ၊ ဒုတိယရက်သတ္တပတ်ငါယောက်ျားတွေရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေ၊ ပြေးတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အလုပ်များနေတာတွေစတဲ့အကြံပြုချက်တွေကြောင့်ဒီအချက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ ၁၂ ရက်မှာငါ gf နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီး iI ဟာအပြည့်အဝစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါအထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိသောအခါငါငိုနောက်ဆုံးမှာဒီအလုပ်မလုပ်ကြောင်းသက်သေပြ။ ငါဟာအရင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး fap လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလုံးဝမရှိဘူး။ ငါတိုက်တွန်းမှုနောက်တဖန်ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်သည့်နေ့ရက်ကာလရှိလိမ့်မည်ကိုငါသိ၏ပေမယ့်ဒီတစ်ကြိမ်ငါလုပ်နေတာကကျိုးနပ်သည်ထက်ကြောင်းကိုငါသိ၏။
DE များအတွက်အကြံပြုချက်များ porn-သွေးဆောင် ED ဘို့ကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်ကြသည်။ ဒီအမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ငါ၏အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောငါ၏အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) လား? သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ်ပါဆုံးအရာခပ်သိမ်းပါရှိသည်။ အဆိုပါဖွယ်ရှိအကြောင်းတရားများလက်ပတ်နာရီ၏အခြေခံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အဘို့ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့် Porn။ အဲဒီနှစျခုဗီဒီယိုများ porn-သွေးဆောင် DE ဆွေးနွေးခြင်း Watch
PIED ကနေပြန်လည်ကောင်းမွန်နှင့်သူ၏လိင်ဖော်ထုတ်ထားသူတစ်ဦးလုလင်ကိုအားဖြင့် TEDx ဟောပြောပွဲ
ဤတွင် DE နှင့်အတူယောက်ျားကနေအနည်းငယ်မှတ်ချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
အင်တာနက်မတိုင်မီက porn အချိန်ကာလနှင့်မြန်နှုန်းမြင့် porn ခေတ်အကြားကွာဟချက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သည်ကိုးဆယ်စုနှစ်အစောပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းများ၌လိင်နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများအပါအဝင်ပြproblemsနာမရှိကြောင်းသင့်အားပြောပြနိုင်သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းနှင့်စတင်ခဲ့သည့်အင်တာနက်ဗွီဒီယိုညစ်ညမ်းမှုထဲသို့ကျွန်တော်စတင်ဝင်ရောက်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုတိုးတက်လာသည်။ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုသည်ကြီးမားသောပြwasနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှအော်ဂဇင်မဖြစ်တော့ဘဲတစ်ခါတစ်ရံယောနိထဲ၌အော်ဂဇင်ကိုအခက်အခဲရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အခြားမည်သည့်လမ်းမှမထွက်ခွာနိုင်သဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ပင်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
အင်တာနက်မတိုင်မီကတွင်ကျွန်ုပ်စိတ်၌စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်မကြာခဏလုပ်ခဲ့သည့်အရာဖြစ်သော်လည်းမြန်နှုန်းမြင့် porn သည်အရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးလုပ်နေသည်။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမခံစားရဘူး၊ ဒါပေမယ့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုသက်သာစေချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အိပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ porn ကကျွန်တော့်ကိုနှိုးဆွပေးတယ်။ ငါတောင်မှငါ့အဘို့ထိုသို့ပြုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှိုးဆော်ခြင်းငှါ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါ့ဇနီးနှင့်အတူလိင်မတိုင်မီ porn ကြည့်ရှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ (မလွယ်ကူသောအရာ) ကိုညီမျှခြင်းကနေ porn ဖယ်ရှားပြီးတာနဲ့, ငါ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကြိမ်နှုန်းကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်ငါ့လိင်ဘဝတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ယခုတွင်ငါသည်ငါ၏အမိန်းမအားငါ့အလိုရှိသမျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ပေးပါ။ အဘယ်သူမျှမကပိုသူမ၏ကျောနောက်သို့ချွတ် jerking ။ လူထင်နေသည်နှင့်တူကျနော်သူမကိုအလိုရှိကြသည်။ sensitivity ကိုပြန်လာသောကြောင့်ငါသည်လည်းအခါတိုင်းပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ ယောက်ျားတွေငါရှိသောကြောင့်လျော့နည်းသွား sensitivity ကို၏ရှေ့တော်၌လိင်စဉ်အတွင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာအော်ဂဇင် 10% နိုင်။ နှင့်အညီ, ဟုတ်တယ်, ပင်ကွန်ဒုံးနှင့်အတူယခုတွင်ငါသည်ပြီးအောင်လုပ်ပါ။
ငါသည်လည်းအစွန်၏မာစတာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ငါ O'ing မပါဘဲ 1 နှင့်3နာရီအကြားဘယ်နေရာမှာမဆိုဆော့ကစားလိမ့်မယ်။ ဒီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်မရဲ့အမှန်တကယ်လိင်ဘဝကိုဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလေးနက်သော DE တစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အသက် ၂၉ နှစ် - အိမ်ထောင်သည် - Porn-ED သွေးနှင့် Delyed သုက်လွှတ်မှုကိုအောင်မြင်စွာအောင်မြင်စွာဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်
မိမိအနာလန်ထူတစ်အချို့အချက်မှာဗီတာမင်အီး creme ဟောင်းဒီ 45 နှစ်ကကူညီပေးခဲ့: အသက် ၄၅ နှစ် - PIED ပျောက်ကင်းသွားသည်။ လ 45 အဘို့အ flatline ၌တည်၏။ အခုတော့နံနက်သစ်သားပြန်ရောက်လာပြီ။ ငါလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းအော်ဂင်စလုပ်နိုင်တယ်။
အသက် ၂၄ နှစ် - စွဲစွဲလန်းလန်းမဟုတ်သော်လည်းနှောင့်နှေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာသည် - ၁၁ ရက်အတွင်းပျောက်ကင်းသွားသည်။
အသက် ၁၈ - ED၊ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း၊ အလွန်အမင်းပြင်းထန်သော fetishes များ။ အောင်မြင်သောလိင် - ငါရောဂါပျောက်ကင်းသည်ဟုခံစားရသည်။
ကျောင်းတွေမှာငါတို့ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကကျန်းမာတယ်၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းတဲ့အချိန် (vibrators နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုတွေအများကြီးပါ ၀ င်တယ်။ ) ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူး၊ ရိုးရိုးလေး၊ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကသဘာဝမဟုတ်တဲ့နည်းနဲ့လိင်ကိုပျော်မွေ့ဖို့သင်ယူနေတယ်၊ အစစ်အမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုအားလုံးမှာဒါကြောင့်မင်းဟာတကယ်တမ်းလိင်ဆက်ဆံပြီးလုံးဝကွဲပြားတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာဘဝမှာပြissuesနာတွေဖြစ်လာမှာသေချာပါတယ်။ နာကျင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကျော်လွှား, သုက်နှင့်လိင်နှောင့်နှေး NoFap
ကျေးဇူးတင်ပါသည် NoFap! (35 ရက်အတွင်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသ)
ငါကစိတ်ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါဒီမိန်းကလေးနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိခဲ့ပြီးနေ့ ၃၀ မှာပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ အဲ့ဒါကအရမ်းခံစားရတယ်၊ ငါကပိုပြီးတော့အကင်းပါးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမပြီးသေးဘူး သူမဤကဲ့သို့သောသူနှင့်တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးသောကြောင့်သူမအားအနည်းငယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညက ၇ မိနစ်ခန့်မျှမကြာခဲ့ပါ။ အရမ်းမိုက်တယ်။ အသက် ၃၀ - နောက်ဆုံးရောက်လာတယ်။ နှောင့်နှေးသုက်လွှတ် fixed ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NoFap
Q: ငါ DE ရောဂါပျောက်ကင်းသွားတဲ့အခါငါ porn ပြန်စသုံးရင်ပြproblemနာပြန်ပေါ်လာမလား။
ဖြေ။ ။ ပြTheနာကပြန်လာပြီ။ ငါရက်ပေါင်း 200 Streak ပြီးနောက်ငါသတ္တဝါတွေပျောက်ကင်းအောင်ငါ PMO ပြန်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစတုရန်းပုံတစ်ပုံသို့ပြန်ထားလိုက် မလုပ်ပါနဲ့
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ကျော်နေပြီး PMO'ing ကိုနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်နေပြီ။ ကျွန်ုပ်သည် DE (နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှု) မှခံစားခဲ့ရ / ခံစားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံး ၁၅ နှစ်အတွင်း Oral, Vaginal သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများမှတစ်ဆင့်အော်ဂဇင်ကိုမရရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထူးခြားသည်ဟုထင်ခဲ့ပြီးနှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူအလွန်အမင်းဖိအားများနှင့်စိုးရိမ်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် GF နဲ့ကိုယ်တိုင်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတာတောင်မှမလွဲနိုင်တဲ့အထိရောက်သွားတယ်။ အဆုံးသတ်ရရင်ငါတကယ်ကိုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေကိုပြန်ထည့်ရမယ်။ အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် ကွောကျဘှယျသော မိနစ်အတွင်းပြဿနာတစ်ခုခြင်းမရှိဘဲရှေ့မှောက်၌မျက်နှာပြင်နှင့်အိုထိုင်ဖို့ပေမယ့်တကယ်အာရုံငါးပါးနှင့်အကြောက်မက်ဘွယ်မိတ်ဖက်နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းရှိနေသော်လည်းထိုသို့ပြုမှနိုင်တော့မည်မဟုတ်ချနိုင်မှ။
NoFap ကိုဖြတ်ပြီးသွားသော YourBrainOnPorn သည်ကျွန်ုပ်ရင်ဆိုင်နေရသောပြသနာများကိုနားလည်စေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အဓိကအားဖြင့် Porn ကိုစွဲလမ်းမှုနှင့်ယနေ့ P. P. ၏နောက်မှ M'ing မှ Dopamine High သည်အောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ရင်းနှီးသောအချိန်ရှိခဲ့သည်။ PIV စဉ်အတွင်းငါသဘာဝအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ GF သည်ကျွန်ုပ်၏ NoFap reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်ကိုလုံးဝထောက်ခံခဲ့ပြီး၊ ဤအဖြစ်အပျက်ကကျွန်မတို့နှစ် ဦး စလုံးမျက်ရည်ကျခဲ့သည်။ ငါ NoFap ၏ 15 ရက်အကြာငါ 41 နှစ်အတွင်းသဘာဝ '' ကိုလက်စသတ် 'ကြပြီမဟုတ်။
ငါအမာခံ mode ကို [မျှ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသွားကြဖို့ငါ့အ gf စွန့်ပစ် or ခဏတာအော်ဂဇင်] အရမ်းရယ်ရတယ် .. ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုအကြောင်းသူ့ကိုမပြောပြချင်ဘူး။ အဲဒါကျွန်တော်မထနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်2နာရီမရပ်မနားကြိမ်မြောက်နေဆဲ cum နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူမသည်တစ်ခုခုတက်ခဲ့သည်ကိုသိသည်။ PMO စွဲလမ်းမှုမရှိသည့်ယောက်ျားများသည်ဤမျှကြာရှည်မခံကြပါ။
ဘဝမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ် porn မရှိဘဲနဲ့ ORGASMED
သန့်ရှင်းသော shit ငါစာသားအရမ်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ငါ ၁၆ နှစ်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေဖြင့်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိခြင်းသည်ယောက်ျားများထက် ပို၍ ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့အမျိုးသမီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ဘ ၀ မှာဘယ်တော့မှအော်ဂဇင်ကိုဘယ်တော့မှမကျူးလွန်ကြဘူးလို့အစီရင်ခံကြပါတယ် ဒါကြောင့်ငါ porn စွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့အခါငါဟာအာဆင်နယ်အသင်းမှာယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အတူအော်ဂဇင်ပြုဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူး။ ငါမုန်းတယ်ငါဘယ်လောက် desensitized မုန်း၏, ငါစသည်တို့ကို porn စက်မှုလုပ်ငန်းစသည်တို့ကိုမုန်းဒါကြောင့်ငါနောက်ဆုံးတော့စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ငါဟာတစ်လလောက်သာညစ်ညမ်းနေတယ်၊ ​​ဒီနေ့မှာငါဘ ၀ မှာပထမဆုံး porn အကြောင်းမလိုအပ်ခဲ့ဘူး။
ငါ y'all ပြောပြချင်ပါတယ်ထင်နိုင်အောင်ငါတကယ်ငါ့အကိုမှန်ကန်အသက်တာ၌မည်သူမဆိုဤအကြောင်းကိုဝါကွှားလို့မရပါဘူး။ ငါစာသားငါကရှင်းပြလို့မရဘူးဒါကြောင့်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ porn fuck ဆိုတဲ့ !!!
အသက် ၃၇ နှစ် - OMFG! ငါ Delayed သုက်လွှတ်မှုကနေမခံစားခဲ့ရကြောင်းငါ့အ 37 နှစ်လိင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်
နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် SO နှင့်လိင်မပျော်နိုင်သောကြောင့်သူမမုန်းတီးခြင်းနှင့်အချိန်တိုအတွင်းမှာညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမနှစ်သက်ခဲ့ပါ။ သူမနဲ့ငါလိုချင်တာကိုလိင်ဆက်ဆံပြီးအဆုံးသတ်နိုင်အောင်ငါ့ရဲ့ SO ကိုပေးနိုင်တယ် ငါအခုမရပ်တော့ဘူး၊ ရည်မှန်းချက်က PMO မရှိတဲ့တစ်သက်တာလုံး။ fapping ကိုသံသယဝင်သူမည်သူမဆိုဤပြissueနာမှာအနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏စကားလုံးကိုပြaနာဖြစ်စေနိုင်သည်။ သက်သေအထောက်အထားတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားပါတယ်။ အခုရလဒ်များကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ပြီးပြီ၊ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2qfrv6/only_a_short_time_in_and_main_goal_achieved/
ငါ Cialis ယူပြီးရပ်တန့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဆိုးရွားသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအတွက် ပိုမို၍ ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ထို့အပြင်ငါ Cialis ရပ်တန့်ငါ့အနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ကူညီလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်တွင် Cialis သည်နှစ်ပေါင်း ၃၀ လုံးလုံးအဖော်တစ်ယောက်နှင့်အတူအော်ဂဇင်ပြုရန်အခက်အခဲများနှင့်ကြုံခဲ့ရသောကြောင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကဲ့သို့ပင် Cialis သည်ကျွန်ုပ်သည်မည်မျှပင်ချိုသာသည်ဖြစ်စေ၊ မရနိုင်သည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်နှင့်ထိတွေ့ရန်ခက်ခဲစေသည်ထင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ပြသနာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ဤကဲ့သို့သောလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဖြန့်ချိမှုကိုအမှန်တကယ်မလိုလားပါကကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဇင်ရှာဖွေခြင်းလိင်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုသံသယရှိသည်။ အခုတော့ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမသုံးတော့ဘူး၊ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုပြီးထိခိုက်လွယ်လာတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်မှန်ကန်ပါက၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာမှရရှိသောအပျော်အပါးကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းခံစားကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အော်ဂဇင်သို့ရောက်ရန်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်၏အခက်အခဲများကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာဤအများအားဖြင့်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပျက်ပုံရသည်။ ယခုသီတင်းပတ်အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်သည်အလွန်ချိုလွန်း။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့ဆွဲဆောင်ခံရသည်ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ငါကအော်ဂဇင်ကိုရှောင်ဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ကျွန်မဟာဆန္ဒကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ပေမယ့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရှောင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
အတွေ့အကြုံအကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာအကြှနျုပျကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်ထက်ကိုယ်တိုင်က masturbating ခဲ့သည်ကိုပိုမိုတူသောဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်နဲ့ငါ့အခက်အခဲများပင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမကြာခဏစိတ်ပျက်စရာကြောင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းဒါမကောင်းတဲ့ဆည်းပူးကြသည်။ ဆနျ့ကငျြဘ၌ဤအနေနဲ့အလွန်အမင်းသာယာသောအတှေ့အကွုံခဲ့နဲ့ကျွန်မနှစ်များတွင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာငါထက်ဖြစ်ချင်နိုင်ခဲ့သည်။
ကျွန်မဦးခေါင်းကို kinda ကောင်းသောခံစားရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ desensitized ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုပေမယ့်ခြုံငုံမေ့သွားရောအထူးပုံရသည်။ အစာရှောင်ခြင်းရှေ့ဆက် nofap ရန်, ဈယခု sensitivty ရှိသည်, ကိုယ့်ကိုနောက်ဆုံးအစဉ်အဆက်ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်တစ် beej ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ငါနေဆဲ protected လိင် (အိပ်ရာ၌ငါ့အကြီးမြတ်ဆုံးအားနည်းချက်) ကိုခံစားရန်ကြိုးစားသေးရှိသည်, ဒါပေမယ့်ယခုအချိန်အထိ nofap လိင်နှင့် blowjobs ယခင်ကထက်ပိုကောင်းခံစားရစေတော်မူပြီ။ http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/2pet05/i_can_finally_enjoy_blowjobs/
ထိုကိစ္စ overcumming: ငါ့ DE Recovery ကိုပုံပြင်
ငါပြောတာနားထောင်ပါ။ Nofap သည်ကျွန်ုပ်၏ပြင်းထန်သောအမှုအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ မှတဆင့်လိုက်နာပါ။ အစွန်းမလျော့နဲ့ ပုံမှန်ရေချိုးပါ။ DE နဲ့ ၇ နှစ်ကြာရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ ၇ နှစ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ဖောက်ပြန်မှုနှင့်ငါ၏ဆက်ဆံရေးကိုပျက်စီးစေခဲ့သည်။
ငါသီအိုရီကို 10+ စမ်းသပ်ပြီးပါတယ်။ အချိန်မရွေးငါ nofap တစ် ဦး Streak ရှိသည်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိသည်, ငါပြီးအောင်။ ငါလှည်းကိုချွတ်နေတိုင်းအချိန်တိုင်းအခြားသူကိုမထိနိုင်ပါ ငါအဲဒီလိုနေထိုင်ဖို့ငြင်းဆန်တယ်
ယနေ့ညနေခင်းတွင်ပြီးပြည့်စုံပြီးစိတ်ကူးယဉ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုအချို့ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်ကျွန်ုပ်သည်ဘယ်သောအခါမျှပြန်လှည့်မည်မဟုတ်ကြောင်းအကြွင်းမဲ့သေချာစွာပြောနိုင်သည်။ ဒါပါ။ ဒီညအရာအားလုံးဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့ညပဲ။ ငါသိတာက nofap ကြောင့်ပါ။ ငါကိုယ်ထိလက်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်သည့်အထိအထိကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြသောနေ့ရက်ကာလ၌မှန်ကန်သောရွေ့လျားမှုအားလုံးကိုငါလုပ်ခဲ့တယ်။ သူမစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိခဲ့သည် ကျေနပ်ပါတယ် ကျနော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနောက်တဖန်ထွက်ဆွဲထားပါတယ်။
DE နှင့်သင်ရုန်းကန်လျှင်သင်ဤ subreddit တွင်ရောက်နေလျှင်၎င်းသည်အလွန်အကျွံ fapping ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ။ ငါဤမျှကာလပတ်လုံးအဘို့ဤ shit နှင့်အတူရုန်းကန်။ အကယ်၍ သင်သည် DE ရောဂါခံစားနေရပြီးကုသလိုလျှင်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
Edge မနေပါနဲ့ သင်မပြီးဆုံးနိုင်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာသင်သည်လုံးဝစိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အနားကဒီကိုမကူညီဘူး သင်ဖျားနာခြင်းနှင့်ချွတ်ယွင်းခြင်းများကိုကြာရှည်စွာပြုလုပ်နေသောကြောင့်သင်အနားယူတိုင်းသင်၏တံဆိပ်ကိုပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်သည်။
ဘိရှော့မထိုးပါနဲ့။ ကြက်ကိုမနင်းပါနှင့်။ မပုံပါနဲ့ ဒါကပြproblemနာတစ်ခုလုံး။ Neo အဖြေကိုရှာနေတာပေါ့ ဒါကြောင့်မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာငါ့ကိုရှာနေတာပေါ့။ သင့်ရဲ့ဒစ်ကိုချပြီးကုစားပါ။ သငျသညျအဆင်သင့်ဖြစ်တဲ့အခါ, အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကကိုင်တွယ်ကြကုန်အံ့။ မင်းလုပ်ခဲ့တာကိုဝမ်းမြောက်လိမ့်မယ်
ဒီဟာကအပြင်မှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအဲ့ဒီကိုအခိုင်အမာယုံကြည်တယ်။ ပုံမှန်ရေချိုးပါ။ သင့်ဒေသကိုသန့်ရှင်းစွာထားပါ။ သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အောက်ဖော်ပြပါကျန်းမာရေးကိုသင်ခံစားရပါလိမ့်မည်။
သိပ်မစဉ်းစားပါနဲ့ အဲဒါတကယ်ကိုခက်ခဲတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒီနှင့်အတူရုန်းကန်သူတစ် ဦး အဖြစ်ငါသိ၏။ သင်တစ် ဦး nofap Streak တည်ဆောက်ပြီးနောက်, ဒီသော်လည်းပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ သင်သည်အမျိုးသမီးထိတွေ့မှုကိုထပ်မံသတိပြုမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ယခုအချိန်တွင်ပျောက်ဆုံးခြင်းသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ ခံစားရတယ်
porn ကိုမကြည့်နဲ့ သငျသညျစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ကိုယ်ကို desensitize ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤတိုက်ပွဲကိုတိုက်ခိုက်နေပါကစစ်မှန်သောကမ္ဘာသည်သင်ဖြစ်ရန်တစ်ခုတည်းသောနေရာဖြစ်သည်။ ငါတို့ကဲ့သို့သောသူများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းသောမျက်နှာကိုကြည့်။ မကြည့်နိုင်ပါ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုကော်မရှင်ထဲကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်။
ငါဒီတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုကူညီလိမ့်မယ်လို့တကယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။ DE သည်အဆန်းမဟုတ်ပါ။ အဲ့ဒီအကြောင်းပို့စ်တွေသိပ်မများပေမယ့်ကျွန်တော့်ကိုခွဲထုတ်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာရုန်းကန်နေရတဲ့သူတစ်ယောက်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီမယ့်သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူး။ ငါသည်ဤ shit ထွက်ရှာတွေ့, ငါကအရေးယူသို့နှင့်သူကထိရောက်မှုကိုမျက်မြင်
NoFap သည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ငါပြန်ကောင်းလာတယ် ငါခုနစ်နှစ်အရွယ်ကတည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမိခဲ့တယ် အသက် ၂၀ ရှိပါပြီ။ NoFap ကကျွန်တော့်အတွက်ကုထုံးတစ်ခုပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့အကြံဥာဏ်ကိုယူပါ၊
အား ယူ၍ ရဲရင့်ခြင်းရှိကြလော့။ မင်းလုပ်နိုင်သမျှအဆိုးဆုံးပဲ
ဒီပယ်နှင့်အတူရုန်းကန်ခြင်းနှင့်အပေါ်နှစ်ပေါင်းများနှင့်သာရှိသောကြောင့် fapping ၏ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ bullshit (PMO) နှင့်ဝေးဝေးနေခြင်းကိုဆက်လက်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့် 'ninja focus' ကိုဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းစလုပ်ကတည်းကမကြာခင်မှာလုပ်ရမယ့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ငါမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဖြာနေတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံစားခဲ့ရပြီး၊ ။
သငျသညျမှကောင်းသောဆရာဂုဏ်ယူပါတယ်ရုံသငျသညျ DE အတိတ်လုပ်ကိုင်ဖို့အတွင်းပိုင်းကြည့်ဖို့ခဲ့သူတစ်ဦးတည်းသာသင့်ရဲ့မသိကြကုန်အံ့ချင်တယ်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကနှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်ဝမ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာနှင့်အတူကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသူသို့မဟုတ်၎င်းကိုတိုးတက်ရန်အကြံပြုချက်များရှိသည့်မည်သူမဆို (စာရွက်စာတမ်းများအပါအ ၀ င်) ကိုကျွန်ုပ်မတွေ့ဖူးပါ။ မင်းလိုပဲငါ Viagra နဲ့ Cialis ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့တယ်။ orgasm ရဖို့အလုံအလောက်ရှည်လျားအောင်ဆက်ထားတယ်။ တစ်နာရီအကြာအားပြင်းထန်စွာနှိုးဆွပေးတယ်။ ငါပုံမှန်ဆေးများလည်းလိုအပ်သည်ထင်။ သတင်းကောင်း: မွေးစားခြင်းအားဖြင့် karezza အလေ့အထများ ကွာ porn ကနေတည်းခိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်ယခုငါမပါ ED meds နဲ့ငါ့အသက်တာ၏စိတ်ကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးလိင်အချို့ကြုံနေရပါ၏ သင်တို့ကိုငါအပေါ်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုရရှိပါသည်။ အကြှနျုပျ၏စိုက်ထူပိုမကြာခဏနူးညံခြင်းနှင့်ပိုရှည်တည်တံ့ဖြစ်ကြပြီးအော်ဂဇင်မဟုတ်တော့ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ lovemaking အားမစိုက်ရနှင့်နေသမျှကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးကခငျြအဖြစ်ကြာရှည်ခံသည်။
ကြှနျတေျာ့စိတျထဲငါလေးတွေရှိနိုင်ပါသည်သဘောပေါက်လွယ်ကူမှာယခုဖြစ်ပါတယ်။ ငါအမှန်တကယ်နီးပါးအချက်ကိုမှာငိုကြွေးအော်ဟစ်မယ်လို့ DE (နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်) ရှိခဲ့သည့်အခါကျွန်မအများဆုံးသဘာဝအလမ်းလိင်ရှိသည်ဖို့နိုင်တော့မည်မပြုစေခြင်းငှါ, ငါသညျငါ့သုက်ပိုးသို့မဟုတ်အချို့သောအခြားမဟုတ်သောသဘာဝကလမ်းအေးခဲဖို့ရှိသည်မယ်လို့ အသက် ၁၉ - ကျွန်ုပ်၌ထူးဆန်းသောဝတ်စုံများရှိပြီးလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကပင်ခက်ခဲစွာမနေခဲ့ပါ
အဲဒါကိုမှာစောင့်ရှောက် fellas အလုပ်လုပ်တယ်
အရူးအမူးစွဲမက်စရာကောင်းတာက ၂၀၀၂ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်သြဂုတ်လမှ ၂၃ ရက်အထိညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကြောင့် ED & SEVERE နောက်ကျသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုကြောင့် (၁၀ နှစ်လုံးလုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအော်ဂဇင်မလုပ်နိုင်ခြင်း) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ ၁၀ နှစ်၊ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလုံးလိင်ဆက်ဆံစဉ်အော်ဂဇင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အားနည်းခြင်း။ မကောင်းသောလိင်ဆက်ဆံမှုဆယ်စုနှစ်တစ်ခု။ ဖြစ်နိုင်သမျှနူးညံ့သိမ်မွေ့စွာပြောရန်အိပ်မက်ဆိုး။ ကျွန်ုပ်လက်ဖြင့်သာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစွန့်ခွာနိုင်ပြီဖြစ်သည်) ယခုတွင်ငါသည်လိင်ကိုပျော်မွေ့နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ NPMO ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် yourbrainonporn.comကိုယ့်ကနေစိတ်ကူးတယ်ဘယ်မှာ။ တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုအတွက် (၃) ပတ်လောက်ပဲကျွန်တော် (၃) ပတ်လောက်ကြာအောင်အရူးလုပ်လိုက်တာအရူးပဲ။ နောက်ဆုံးမှာလအနည်းငယ်အကြာမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အော်ဂဇင်သာသနာပြု။ ၎င်းသည်အဆက်မပြတ်ရုန်းကန်နေရသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ နှင့်တစ္ဆေခွေးလိုပဲ porn = အဆိပ်။ သေပြီလေးနက်တယ်
ကျွန်ုပ်ပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပထမနှင့်ဒုတိယပတ်သည်ပြီးဆုံးရန်မခဲယဉ်းပါ။ PMO ကိုအနည်းဆုံး ၅ မိနစ်တိုင်းစဉ်းစားမိသော်လည်းလုပ်ရန်တစ်ခုခုအမြဲတမ်းရှာတွေ့ခဲ့သည်။ တတိယပတ်အစမှငါအရမ်းခက်သွားတယ်။ ငါအလုပ်မှာဒါမှမဟုတ်ကစားတဲ့အခါငါတောင်အာရုံမစိုက်နိုင်ဘူး။ ငါရက်သတ္တပတ် ၄ ရက်အကုန်မှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ငါတွေ့ခဲ့တယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲငါလိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့ရင်ဒုတိယအကြိမ်။ ငါလိမ်မည်မဟုတ်, ငါ့ဘဝ၏အကောင်းဆုံး O မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ကျိန်းသေငါ့အသက်ကို၏အကောင်းဆုံးခံစားမှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အခု nofap ကပိုပြီးလွယ်လွယ်ကူကူရလာတာတွေ့ရပြီးရလဒ်ကိုမြင်ပြီးလှုံ့ဆော်မှုကိုပြန်ရလိုက်သည်။ [မှာအကောင့်ပြည့်စုံဖတ်ပါ အသက် ၂၃ - ရက် ၄၅ အစီရင်ခံစာအရကျွန်ုပ်၏နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့သည်]
နှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းငါသည်လည်းငါ့အဘို့စတင်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ anti-depants ဆေးတွေလို့ငါထင်ခဲ့ပေမဲ့ငါ့ရဲ့ဆေးကိုပြောင်းလဲတာကအများကြီးမကူညီဘူး။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးကိုစပြီးအပြစ်တင်မိသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုစွဲမက်စရာမကောင်းတော့ပါ၊ သို့မဟုတ်သူမအင်တာနက်ပေါ်မှတွေ့ရသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသာလုပ်ခဲ့မည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်ထွက်ပြေးနိုင်လိမ့်မည်။ နှောင့်နှေးသုတ်သင်ပယ်ရှင်းခြင်းသန္ဓေသားရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်၊ နောက်ဆုံးငါ ED လက္ခဏာအချို့တွေ့ကြုံခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်“ နွေးထွေးခြင်း” အတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းကိုဝက်ဘ်ဆိုက်စာကြည့်တိုက်မှမြင်ကွင်းများနှင့်ဖြည့်စွက်ကာသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်၎င်းတို့အကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတက်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည် သင်အဲဒီအချက်ကိုမရောက်ချင်ဘူး မိမိအနာလန်ထူအပါအဝင်ပိုကိုဖတ်ပါ။
90 ရက်ပေါင်းခက်ခဲ mode ကိုအပြီးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရလဒ်များကို
မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထိခိုက်လွယ်မှုနှင့် DE လုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ကုသ။ တစ်ရက် 45 တွင်, ငါဖြစ်သူနှင့်အတူတညဥ့်ရပ်တည်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါပြီးသွား withut နာရီသွားနိုင်သည့်အခါအစဉ်မပြတ်ငါ, DE ဒုက္ခိတခံစားခဲ့ရလေသည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏလိင်ဆက်ဆံခံထားကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထက်အများကြီးလျော့နည်းတဲ့စိတ်ကျေနပ်စရာဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါသည်ဤကြောင့် lube နှင့်သေခြင်းချုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲ fapping ၏နှစ်မျှသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ, ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတျကွောငျးနားလည်သဘောပေါက်။ 45 ရက်အကြာမှာ, ဒီလုံးဝ, 100% ပျောက်ကင်းအောင်ကုသခံခဲ့ရသည်။ လိင်, အစဉ်အမြဲငါကြောင့်ခံစားရနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့သည်ထက်ပိုကောင်းမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခံစားခဲ့ရတယ်, ငါပြီးစီးငါပေါက်ကွဲခြင်းဟုပြောရကြမည်။
90 နေ့အစီရင်ခံစာ -
PMO နှစ်ပေါင်းများစွာကနေငါမသိဘဲလိင်ကာလအတွင်းပုံမှန်အော်ဂဇင်ကိုခွင့်ပြုကြောင်းသဘာဝသွေးသားဆန္ဒရမ္မက်တက် messed ခဲ့သည်။ ငါခက်ခဲရပေမယ့်ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူဖြစ်ချင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ငါလိင်ရှိသည်ဖို့ရှက်ကြောက်ခြင်းရှိရာအမှတ် DE (နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်) ခဲ့နိုင်ဘူး။ အခုတော့? ဒါဟာတည်ငြိမ်ရည်းစားရှိသည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အကူးအပြောင်းခဲ့ပေမယ့်သူမသည်ငါနှင့်အတူမေတ္တာရှင်များနှင့်လူနာခဲ့ - ငါသည်ကိုယ်နှင့်အတူမဖြစ်ကြောင်းကိုတစ်ခုခု။ အကြှနျုပျ၏ DE အများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ပြီး, နှောင့်နှေးများအတွက်နည်းစနစ်ယခုသူမ၏အော်ဂဇင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလုပ်အသုံးပြုကြသည်။ ငါ့အတက် pent လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒယခုအခါတရားဝင်ထွက်ပေါက်ရှိပြီးဒါဟာကျွန်မနောက်တဖန်ဒုစရိုက်ဖြေ၏ခံစားချက်များကိုမပါဘဲဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတ္တဝါဖြစ် soooooo ကောင်းသောခံစားရ၏။
ငါအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် 14 ထံမှ masturbated, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်ပို။ အစဉ်မပြတ်ငါတစ်ကျွမ်းကျင်ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူပါပြီနှင့် 16 / 17 အနည်းဆုံးအသက်ကတည်းကအင်တာနက်ပေါ်ရှိညစ်ညမ်းရယူသုံးခဲ့သညျ။ ငါသာနောက်ပိုင်းတွင် 20 ကနေလိင်တက်ကြွဖြစ်လာခဲ့သည် (နှင့်ဒီ site ၏အများဆုံးဖတ်ရှုပြီးနောက်ကျနော်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကောင်းနားလည်) ။ သို့သျောလညျး, ငါ ejaculate နိုင်ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ငါမှာအားလုံးထိုးဖောက်မှုလိင်ကနေအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမဆွတယ်။
နောက်ဆုံးတော့အသက် ၂၈ နှစ်မှာလိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူဆီကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့ဆရာ ၀ န်ဆီကိုသွားခဲ့တယ်။ သူကကျွန်တော့်ကိုလိင်ကိစ္စကုထုံးဆရာဆီလွှဲပြောင်းခဲ့တယ်။ ဒါကငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တာ။ သူမသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များရှိပြီးပိုမိုစိတ်အေးလက်အေးချုပ်ကိုင်ထားမှုမှလှုံ့ဆော်ရန်ကျွန်ုပ်၏လိင်တံကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုအကြံပေးသည်။ နောက်ဆုံးတော့သူမကငါ့ကိုပြissueနာကိုအမှန်တကယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်ငါသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်မကစားဘဲရှောင်ရှားရန်နှင့်ငါ့စိတ်ကူးကိုသာသုံးရန်လိုအပ်သည်ဟူသောရာဇသံကိုပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လှုံ့ဆျောမှုငါ့အခိုင်မာတဲ့အချက်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ထူးဆန်းစွာ) မပြုခြင်းအတွက်အကြောင်းပြချက်ကောင်းတခုမတွေ့မချင်းကျွန်ုပ်သည်ဤလှုပ်ရှားမှုမှရှောင်ရှားရန်အလွန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတစ်ရက်တွင်ကျွန်မအလည်အပတ်ခရီး၏မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့သည်။ သတ္တိရှိရှိပြသခြင်းဖြင့်သူမ၏သတ္တိကိုပြသခဲ့သည်။ နှစ်ကြိမ် အသက် ၃၀ ရောက်တော့ငါနောက်ဆုံးမှာလိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုခဲ့တယ်။
အကျင့်ဆိုးတွေပါ။ ဒါပေမယ့်ချိန်းတွေ့တဲ့ဖိုရမ်မှာကျွန်တော့်ရဲ့ပါဝင်မှုကငါ့ကိုညွှန်ပြခဲ့တယ် yourbrainonporn.com ကအားလုံးကိုအတူတကွနှိပ်လိုက် ဤတွင်ကျွန်ုပ်အမြဲတမ်းရပ်တန့်သွားစေရန်လိုအပ်သောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ဒါဆိုဒါကလွန်ခဲ့တဲ့သုံးပတ်ကပါ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအခြားသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးကျွန်မကားနောက်ဖက်တွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ငါစာသားအတွင်းစာသားအော်ဂဇင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာအလွန်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ အခုငါ reboot ဆက်လုပ်ရတာကိုအရမ်းပျော်တယ်။ လူမှုရေးတိုးတက်လာသည်။ ငါသွားတွေ့ရင်အတွေ့အကြုံပိုများလာတယ်။ ယခုအချိန်တွင်ပစ္စုပ္ပန်ကိုကြည့်ပါ။ ငါသည်လည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အများကြီးအများကြီးပိုမိုဆက်စပ်။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုယ် YBOP အပေါ်အများအပြားသူချင်းစွဲတူသော ED ထံမှမခံစားခဲ့ပါဘူး။ ကရောက်ရှိလာခဲ့အခါတိုင်းကျွန်မရဲ့ရည်းစားနှင့်အတူလိင်၏အလားအလာကိုမှာခက်ခဲရနိုင်ခဲ့တယ်, ဒါပေမယ့်ငါအော်ဂဇင်အောင်မြင်ရန်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ, မဟုတ်လျှင်အလွန်ပြင်းထန်သောဆွကနေဒါမှမဟုတ်ကျွန်မမကြာခဏစောင့်ကြည့်ကြ porn အချို့အကြောင်းကိုကူးယဉျမှ။ ဆက်ဆံရေးတိုးတက်သကဲ့သို့ငါနေဆဲ masturbating နှင့်မကြာခဏ porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တကယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘဝကိုမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အရည်းစားစိတ်ထဲမပြုခဲ့ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးငါပိုပိုပြီးသူမ၏ဖျက်ဖို့စတင်ခဲ့ရာ, (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်ဖွင့် porn မှ masturbate မှ) porn စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် masturbated, နည်းလေငါသူမ၏နှင့်အတူရှိနှင့် / သို့မဟုတ်သူမ၏နှင့်အတူလိင်ပယ်ချမယ်လို့နှိုးဆော်ခြင်း။ နောက်ဆုံးတော့သူမကြောင့်လိင်ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုမှစတင်ခဲ့သောကွောငျ့အကြှနျုပျကိုရပ်တန့်စေချင်တယ်။
အသက် ၂၄ - နှောင့်နှေးသည့်သုက်လွှတ်မှုမှကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း
(အခြားဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှပြန်ကြားချက်) သင်ဟာကံကောင်းတာကသင့်မှာ ED မရှိခဲ့ဘူး၊ သူမအတွက်လိင်မှုဆိုင်ရာစိတ် ၀ င်စားမှုမရှိခြင်းကနာကျင်မှုလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါ ED ရှိသကဲ့သို့တူညီသောနှင့်ပိုဆိုးဖြတ်သန်းသွားပါ။ ငါအများကြီးပိုကောင်းလာပြီသည်အထိအားလုံးအဆင်ပြေသည်အထိအချိန်ယူရမည်ကိုသိသော်လည်းယခုကျွန်ုပ်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီ။ ငါနေဆဲ / မရှိသလောက်မရှိသေးပါငါ့အဖော်နှင့်အတူအလိုအလျောက်စိုက်ထူရ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အကြိမ် ၉၀% ကိုအလင်းထိတွေ့မှုအနည်းငယ်ဖြင့်ရပြီးဖြစ်သည် (သူမသည်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမထနိုင်၊ အလင်းရောင်ဖြင့်သာ)
ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်ငါ့လိင်စိတ်ကမလုံလောက်သေးသော်လည်းငါဖြစ်ပျက်သောအခါငါကြိုက်နှစ်သက်သည့်နေရာ၌ရှိသည် (ငါအလွန်စိုးရိမ်စိတ်များစွာရှိသည်) ။ ငါတို့စဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲဒီမှာငါ့အ sensitivity ကိုနှိုး။ ကျွန်တော့် reboot မလုပ်ခင်မှာ Viagra ကိုယူခဲ့တယ်။ ဘာမှဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ porn ကို orgasm မှာအကြိမ်တော်တော်များများစဉ်းစားရတယ်။ ယခုငါတစ်ပတ်လောက်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်ကျော် orgasm မပြုခဲ့လျှင်သို့မဟုတ်ငါ orgasm ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါကသူမကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့သော caressing မှပင်တားဆီးရန်ရှိသည်။ တိုးတက်မှုကြီးပါပဲ။
DE ။ သေဆုံးမှုချုပ်ကိုင်ခြင်းဟုလူသိများသော Delay သုက်လွှတ်ခြင်းအတွက်ရပ်တည်မှု။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အတော်ကောင်းခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်လိင်၊ blowjobs နှင့် handjobs များမှမည်သည့်အခါကမှမလာခဲ့ပါ။ အတူတူနေကတည်းကငါ fapping နှင့် porn အပေါ်ပေါ့ပေါ့ပေမယ့်အားလုံးအတူတူအရှုံးမပေးဘူး။ ငါစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပြီးပြန်လည်သတ်မှတ်ချိန်ရောက်ပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ဒါနဲ့ငါရပ်လိုက်တယ်။ မနေ့ညကကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြတာပါ၊ ဒါဟာအံ့သြစရာကြီးနှင့်ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်။ ငါ fap ချင်တဲ့အခါငါ browse အဲဒီမှာဖြစ်ခြင်းများအတွက်မ fap ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(ရက်ပေါင်း ၉၀) ဦး ဆုံး၊ ကျွန်တော် DE ပျောက်သွားသည်။ လိုပဲတကယ်ပဲ။ ငါမတိုင်မီနာရီပေါင်းများစွာကြာရှည်စွာနေနိုင်ပြီး ၁၀ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါသည်မိနစ်အနည်းငယ်အနားယူပြီးနောက်နောက်တဖန်အလွယ်တကူသွားနိုင်ဘူး။ ရက်ပေါင်း ၉၀ - DE ပျောက်ကင်းသွားပြီး၊ လူမှုရေးပိုမိုကောင်းမွန်ရန်၊ ပိုမိုကောင်းသောမျက်စိအဆက်အသွယ်လိုအပ်သည်
ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုမှာ ... ရက်သတ္တပတ် ၁၀ ရက်တွင်ပြန်လည်စတင်သည်။ ယနေ့ညတွင် Missus နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆွေးနွေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဝန်ကိုအတော်လေးလျင်မြန်စွာမှုတ် (DE ကိုအနိုင်ယူခြင်း) ကိုသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပီးဆုံးရနျ။ ငါဘယ်တော့မှမဖြစ်သကဲ့သို့တလျှောက်လုံးနှေးကွေးသွား။ , တောက်ပခဲ့သည်။ ငါမကြာခင်အဆုံးသတ်ချင်ကြဘူးကြောင့်ငါအဆုံးဆီသို့ချက်ချင်းပြန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သည်ဟုပင်ပြောနိုင်! နှစ်ပေါင်းများစွာ DE မကောင်းသောအမှုနှင့်အတူတစ်စုံတစ် ဦး ကမဆိုး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ NoFap အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားငါ၏အ DE ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ!
မနေ့ကငါ့မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးငါ့ကောင်မလေးနဲ့ငါလိင်ဆက်ဆံခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ဟာလပေါင်းများစွာလိင်တက်ကြွမှုရှိခဲ့ပေမယ့်မနေ့ကအထိ၊ လိင်ကိစ္စမှာတစ်ခါမှမအော်ခဲ့ဖူးဘူး။ သူမသည်အကြီးမြတ်ဆုံးခံစားမှုဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောအလေးချိန်ကသူမအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိကိုယ်ကိုသတိမဲ့နေခြင်းကြောင့်၎င်း၏ပခုံးများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များကိုပါဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ နောက်နှစ်နှစ်အကြာလိင်မှုကိစ္စအဆုံးသတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအော်ဂဇင်မပြုခဲ့သည့်နောက်၊ ကျွန်ုပ်သည်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်၏ DE DE ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် = D
ငါနှစ်ပေါင်းများစွာနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်သန္ဓေတည်ခြင်းမရှိခံစားခဲ့ရပေမယ့်ယခု NoFap နှင့်အတူလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပုံရသည် (LINK) ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒီပြproblemနာကနှစ်ဖက်စလုံးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ fapping ကြောင့်အာရုံမခံစားနိုင်မှုတိုးလာတယ် - ဒါကငါကွန်ဒုံးနဲ့အာရုံခံစားမှုမရရှိနိုင်ဘူး။ ဒုတိယအနေနဲ့ porn ကြောင့်လိင်ကိစ္စကိုမျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူး။
ငါကြင်နာ၏ကိုယ်အဘို့ဤအစစ်ဆေးရေးဂိတ်ငါမိုးသည်းထန်စွာအသက်ရှူသို့မဟုတ်ညည်းတွားမျှော်လင့်ထားဥပမာခဲ့သောကြောင့်ဤမျှော်လင့်ချက်များအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ပါတယ်, ငါသည်သူမမရောက်မှီမိန်းကလေးတစ်ချိန်ချိန်လုံးဝအရူးသွားကြဖို့မျှော်လင့်ထား။ ဤအစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေ့ဆုံမရှိရင်ငါပြီးအောင်မပေးနိုင်ဘူး။ ငါလွှတ် nofap ထံမှယူဖို့အဓိကအရာလူတိုင်းကိုလိင်နှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်သင်ကခံစားရန်သင့်ကိုယ်ပိုင်လမ်းကိုရှာဖွေရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်ခန့်မှန်းနိုင်အောင်လိင်လူတစ်ဦးစီနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကလိင်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်သင့်တယ်ဆိုတာမှားယွင်းတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖန်တီးပေးတယ်လို့ထင်တယ်။ ဒီဂျပိန်စူပါမော်ဒယ်တွေကမိန်းမတွေဘယ်လိုကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်အတုကိုဖန်တီးတယ်။ ဒါကြောင့် nofap နဲ့ဆက်လုပ်ပါ (ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတစ်ရံမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့လိုတယ်၊ ထူထပ်တဲ့ကွန်ဒုံးဖြင့်ပြုလုပ်ပါက) လုံးဝညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများမလုပ်ပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာချက်အရသင်သည်လိင်ဆက်ဆံလိုသောကြောင့်လိင်မဆက်ဆံပါနှင့်၊ ဤသူနှင့်သင်လိင်ဆက်ဆံလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပူပြင်းတဲ့သူကပြောတယ်! ငါနီးပါးရှစ်လအတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ PIV ထံမှ orgasmed!
ကျွန်ုပ်သည် ၈ ရက်ဆက်တိုက်သာလျှင်၊ အကြိမ်အနည်းငယ်သာပြန်လည်စတင်ပြီးနှစ်လအတွင်းသုံးကြိမ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ငါလိင်တစ်နာရီအကြာ၌ပင်ဇန်နဝါရီလကတည်းက (ကွန်ဒုံးနှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ) လိင်ကနေအော်ဂဇင်နိုင်ဘူး။ ယနေ့ကွန်ဒုံးကိုလိင်မှ orgasmed ။ ဒါတိုးတက်မှု၊ မင်းသမီးနှင့်လူကြီးလူကောင်းပါ။ အလွန်ကောင်းသော subreddit အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ EDIT - ဒီဟာက ED မဟုတ်ပေမယ့် DGS ကလိင်ကိစ္စကိုပျက်စီးစေတယ်လို့ပြောသင့်တယ်။
သငျသညျ DE (နောက်ကျသုက်) ရှိသည်နှင့်ငါအဖြစ်ကောင်းစွာတူညီတဲ့ပြဿနာရှိသည်။ လိင်စဉ်အတွင်းအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ခြင်းငါက Google ရှာဖွေနေနှင့် YBOP နှင့် NoFap ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာတက်အဆုံးသတ်အဘယ်ကြောင့်အများအပြားအကြောင်းရင်းများတဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ (ချည်ရန် LINK) ငါထို့နောက်ငါမိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ဆို PMO လုပ်နေစရာမလိုဘဲ 90 ရက်ပေါင်းအကြောင်းကိုသွားလေ၏။ ကျနော်တို့လိင်အကြိမ်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပေမယ့်နေဆဲပြဿနာတွေရှိခဲ့ပေမယ့်အဲဒီနောက်နေ့က 98 အပေါ်ငါဖြစ်ချင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ. အစဉ်အမြဲငါငါလိင်ရှိသည်4ကြိမ်နဲ့ကျွန်မလိင်စဉ်အတွင်းပျော့သွားပါကအခြား3ကာလ၌တစ်ဦးအကြောင်းကိုအော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ငါသော်လည်းပျော့သွားနှင့်သူမတစျခုလုံးအရာနှင့်အတူအလွန်မင်္ဂလာရှိ၏ရှေ့၌ငါအတော်လေးတစ်ဦးအနေဖြင့်နောက်ဆုံးမှ။ ငါပျော့သွားရပါဘူးရှိရာကြိမ်ငါ 15 မိနစ်အကြာတွင်နောက်တဖန်ခက်ရသည်နောက်တဖန်လိင်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၁၈ ရက်ကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ၊ တခါတရံမှာငါတောင်မှစိုက်ထူခြင်းတောင်မရရှိနိုင်ဘူး၊ ငါလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါလိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့အများကြီးကွာခြားတယ်။ ဒါဟာအလွန်အမင်းစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ စိတ်ရှုပ်စရာတစ်ခုလြော့ပေါ့ခနျမှနျးခကျြရှိ၏ ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပြည့်အဝမကုသနိုင်သေးပါကကျွန်ုပ်သည် reboot သံသရာ၌လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစတင်ပြုလုပ်နိုင်ပါ့မလားဟုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမှန်တကယ်ပင်ပျော်ရွှင်မိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဆက်လက်၍ ဤအရာများကိုမည်သည့်နေရာသို့သွားသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ 🙂
ကောင်းပြီ၊ ဒီမှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက် ၉၀ ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ကံကြမ္မာကိုခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ ငါ fapping မပါဘဲရက်ပေါင်း 90 သွားကြဖို့မစ်ရှင်အပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? အကြောင်းပြချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ တစ်ယောက်အတွက်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးတာကိုကြိုက်တယ်၊ ငါတကယ်လုပ်နိုင်မလားဆိုတာတကယ်ကြည့်ချင်ခဲ့တယ်။ နှစ်၊ ငါအရင်ကရည်းစားနဲ့အတူသဲသောင်ပြင်တွေတော်တော်လေးဆိုးရွားခဲ့တယ်၊ ငါဟာတခြားအမျိုးသမီးတွေကိုမတွေ့ခင်သူတို့ကိုပြုပြင်ချင်ခဲ့တယ်။ ငါထွက်ပေါက်ရနိုင်ဖို့လိင် ၂-၃ နာရီပြောနေတာပါ။ ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်တော့ငါကအိမ်ကိုအလည်သွားပြီးခဏတာရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်။
ဒီတော့ငါနဲ့ငါအိမ်ပြန်ဖို့အခုသွားခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကော။ ကျွန်မတို့ဟာတစ်လကြာပျော်ရွှင်စွာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုကိုခံခဲ့ကြရတယ်။ ငါ၏အနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်လည်းအများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ပျောက်ကွယ်သွားကြပုံရသည်။
NoFap ကငါ့ကိုကူညီနိူင်ပါသလား။ ကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပါ
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၁၈ နှစ်ရှိပြီးလွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ခွဲကာလအတွင်းနေ့စဉ် (သို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါ ပိုမို၍) တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ငါ ၆ နှစ်ထဲကအနည်းဆုံး ၄ မှ ၅ အထိကြည့်ရတာခက်နေတဲ့ porn ကိုကြည့်နေတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ ၂ ညလောက်အပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးငါစီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတော့ဘူးလို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ငါဟာ ၂ စက္ကန့်အတွင်းမှာငါဟာဒီထက်ပိုပြီးနည်းနည်းလောက်ထည့်သွင်းပြီးမှုတ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကောင်မလေးကငါ့ကိုခေါင်းပေးနေစဉ်မှာတောင်မှထွက်ပစ်မှာကိုငါအရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါတစ်ခါတစ်ရံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုစဉ်စက္ကန့် ၃၀ အောက်တွင်စာသားအရသန္ဓေတည်သည်။ ဒါပမေဲ့အံ့သွစရာကကြှနျုပျတို့သညျ ၃ နာရီခန့်လိင်ဆက်ဆံဖို့ကွိုးစားခဲ့သညျ၊
ပို၍ ဆိုးသည်မှာကွန်ဒုံးများထည့်ထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘာမှမခံစားနိုင်တော့ပါ။ ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်လိင်အင်္ဂါ၌လိင်တံရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်အခြေခံအားဖြင့်ဘာမျှမခံစားခဲ့ရပါ။ ဒါပုံမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူး ကျွန်တော်ဟာ doggie၊ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုနှင့်သူမအပေါ်ထိပ်ဆုံးတွင်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တွန်းထုတ်နေစဉ် ၂-၃ မိနစ်ခန့်စိုက်ထူနိုင်ခဲ့သည့်အခါတိုင်းငါ flaccid = တိုင်းသွားတိုင်း ((အရမ်းစိတ်ပျက်စရာကောင်းလှသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အဝေးကြီးသို့ရောက်ရန်ရှိသည်) သူမအစကစိုစွတ်နေပုံရတယ်။ ကျွန်တော်ထင်တာကလုံလောက်တဲ့ lube ကိုသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကထုံနေသလိုပဲ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ငါဟာပါးစပ်ကိုတောင်တကယ်မခံစားခဲ့ရဘူး။
ငါမဆိုအာရုံခံစားမှုထဲကရနိုင်ခဲ့သည်တစ်ခုတည်းသောလိင်သူမကငါ့ကို handjob ပေးသောအခါဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကငါဟာအပျိုစင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်၊ သူမကနားလည်တယ်လို့ပြောတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမစိတ်အနှောင့်အယှက်တစ်ခုလုံးကသူ့ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသလိုပဲ။ ငါ့မှာအလုပ်လုပ်စရာပစ္စည်းမရှိတဲ့အတွက်ငါ့ကိုစွန့်ခွာခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး (=
ငါ DE နှင့် ED fix ဖို့ပြီးခဲ့သည့်မေလကစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လုံးဝကုသမှုမခံရသေးသော်လည်းအရာများစွာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးဆက်လက်တိုးတက်ရန် (ဖြည်းဖြည်းချင်း) ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပြီးပြည့်စုံခြင်းမရှိသေးပါ။ ငါလုံးဝမ PMO သို့မဟုတ်လိင်၏ပထမ ဦး ဆုံး 2.5-3 ရက်သတ္တပတ်သွား၏။ ထို့နောက်ငါ (O အပါအ ၀ င်) နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ကျွန်ုပ် DE သည်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဟုတ်ကဲ့! ဘာနာကျင်မှုလဲ တော်တော်ပြင်းထန်တယ် ထိုအခါငါ ED အများကြီးတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်တိုတောင်းတဲ့ကာလ၌ကြီးမားသောတိုးတက်မှု။
ရုံ NoFap သာ 35 ရက်အကြာမှာ, ခုနစ်နှစ်ဘို့ကြိုးစားနေနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းမပြုပြီးနောက်တစ် blowjob ကနေကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးအော်ဂဇင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ခုနစ်, fuck ဆိုတဲ့, YEAR ။
ယခု FAP ။ ငါသည်သင်တို့ဝံ့နှစ်ဆ။
နေ့ ၂၄ - ငါပျောက်ကင်းသွားပြီ။
အဘယ်သူမျှမ fap ဖြစ်ကောင်းငါလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်င့်ကိုအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီးအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ် DE မှခံစားခဲ့ရသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မထိန်းချုပ်နိုင်မှသာသမိုင်းကြောင်းအရအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအော်ဂဇင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် fap ၏ 26 ရက်အကြာမှာ; ကိုယ့် (အတိတ် ၂၄ ရက်အတွင်း) ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အော်ဂဇင်ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။
ကျိန်းသေငါ့အသက်ကိုအတွက်အကောင်းဆုံးခံစားချက်တွေကိုတစ်ခုမှာ, ငါအစဉ်အမြဲ porn သို့မဟုတ် masterbation ပြန်သွားဖို့အစီအစဉ်ဘူး။
NO FAP ရောဂါပျောက်ကင်း DE
ရုံမျှမ FAP ငါ PIV နဲ့အော်ဂဇင်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုချင်တယ်။ ဒါကြောင့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ငါတိုင်းအရာကြိုးစားနေခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောမိန်းကလေးများနှင့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောကွန်ဒုံးအမျိုးအစားများလိုပဲ / စေသည်ငါလိင်ကုထုံးထံသို့သွားလေ၏။ ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သောတစ်ခုတည်းသောအရာကနှောင့်နှေးသုက်ကိုကုသဘယ်သူမျှမ FAP ဖြစ်ပါတယ်။
[အောင်မြင်မှုပုံပြင်!] ငါနောက်ဆုံးတော့ပြီးဆုံး! NSFW
၄၈ ရက်သည် fap မရှိ၊ porn မရှိ၊ ဘာမှလည်းမရှိ။ သန့်စင်ခန်းသုံးရန်နှင့်အမှိုက်များကိုသာကျွန်ုပ်ထိမိသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ဒီဟာကိုမလုပ်သေးဘူး၊ ငါငါ့ကောင်မလေးအတွက်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ ငါအိပ်ခန်းထဲမှာပြproblemsနာတချို့ရှိခဲ့ပြီးအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကြောင့်ငါဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်ဘူး။ အစဉ်အဆက်လိုပဲ။ ငါသူမ၏မျက်နှာကို ထောက်၍ ဆုံးဖြတ်ပြီးငါ့ခရီးအတွက်ဤခရီးကိုစခဲ့သည်။ ကောင်းပြီဒီမှာငါ ၄၈ ရက်ရောက်နေပြီ။ ဒီနေ့ဟာနေ့ကိုမှတ်သားထားတယ်။ ငါသူ့အဘို့ကိုလက်စသတ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၌အကောင်းဆုံးသောအော်ဂဇင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ လာမယ့်သူတွေကဒီလိုမျိုး (pun ရည်ရွယ်ထားတယ်) ဆိုရင်၊ လူတိုင်းကိုကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ဒါဟာထိုက်တန်ပါတယ်။ အရွုံးမပေးနဲ့။ တစ်ကြိမ်မှာတစ်ရက်ယူပါ။
ကျွန်တော်လုပ်တာပါ! ငါနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော့်ဇနီးသည် လာ. ,
သုံးနှစ်ကြိုးစားပြီးနောက် ၄ လကြာ NoFap အထောက်အပံ့ပေးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်ဇနီးသည်ကိုပြီးဆုံးသွားခဲ့သည်။ နှစ်အတော်ကြာကတည်းက fapping ဆိုတာပြtheနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခု ၃၈ ရက်လောက်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ငါခေါင်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီး အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
NoFap လိင်အမှန်တကယ်ကောင်းသောခံစားရစေသည် (မပို DE)
ကောင်တာ၏တိကျမှန်ကန်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဒုတိယမြောက်ပြန်လည်ထူထောင်ပြီးနောက်ငါးရက်အကြာအထိကျောထောက်နောက်ခံပြုသည်။ ငါစတင်ကတည်းကတစ်လနှင့်5ရက်။ အကြောင်း။
ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုကျွန်ုပ်ခံစားဖူးသောမည်သည့်မိန်းကလေးနှင့်မဆိုကျွန်ုပ်ထက်ပိုမိုသောနည်းလမ်း။ ယောက်ျားများ၊ အကယ်၍ သင်က "စူပါပါဝါ" (သို့) အခြားမည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမဆိုမယုံလျှင်၊ ငါယုံကြည်သည် - NoFap သည်ထင်ထားသကဲ့သို့လိင်သည်အံ့သြဖွယ်ခံစားစေသည်။ ငါ fapping နှင့်အတူငါ့အ sensitivity ကိုသတ်နှစ်ပေါင်းများစွာ။
ရုံနောက်ဆုံးညဥ့်အတူတူငါသဘောပေါက်ငါသူမ၏ V ကိုအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရာထူးကြိုးစားနေငါ့ကိုယ်ပိုင်လက်ထက်လမ်းပိုကောင်းခံစားခဲ့ရရှိရာအမှတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဤသည်ငါ့အဘို့ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အတိတ်ဆက်ဆံရေးအပေါ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ဖူးသောငါ၏နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်, အတိတ်၏အရာဖြစ်၏။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် NOFAP! ငါထပ်မံ relapse ဖို့သွေးဆောင်မှုကိုမခံစားရဘူး။ ကောင်းသောနေ့ရက်များနှင့်ဆိုးသောနေ့ရက်များရှိသော်လည်း၊
ငါလုပ်ခဲ့တယ် ... ** အကယ်၍ ဘုရင်ကအဲ့ဒီလိုပြုခဲ့တယ်
မူရင်း post: http://www.reddit.com/r/NoFap/comments/1i682o/why_i_want_to_quit_day_1/
ငါလိင်ကာလအတွင်းအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ အစဉ်အဆက်။ သေမင်းလက်ကလုံးဝထုံခဲ့ကြောင်းဤမျှလောက်ငါ့အလိင်တံမြိ်ု့။ ငါလိင်စဉ်အတွင်း NOTHING ခံစားရတယ်။ ကိုယ့်အနေနဲ့စိုက်ထူထားရန် porn အကြောင်းကို fantasize ခဲ့ရသည်။ အကြှနျုပျ၏ရည်းစားကသူမ၏အမှားဖြစ်ခဲ့သည်ထင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘဝကိုကြောက်မက်ဘွယ်သောကြီးနှင့်ငါတို့ဆက်ဆံရေးဟာကုန်းဆင်းအတိုင်းသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ့်အော်ဂဇင်မှလိင်ပြီးနောက် 30 မိနစ် masturbate ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသနားစရာနှင့်ရှက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ့ကောင်မလေးကအားလပ်ရက်အရက် ၂၀ လောက်မှာထွက်ခွာတဲ့အခါငါပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာတကယ်ခက်ခဲ fucking ခဲ့သည်။ သွေးဆောင်မှုကိုဖယ်ရှားဖို့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကိုတောင်ရောင်းလိုက်တယ်၊ ဒါကိုငါပြုပြင်ရတာဘယ်လောက်လေးနက်သလဲ။ ထိုအခါငါကရက်ပေါင်း 20 မှလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမ porn, မျှ edging ။
မနေ့ကငါ့ကောင်မလေးအိမ်ပြန်လာတယ် NoFap ကကျွန်တော့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်မသိဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင်၊ ငါကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့လိုပြီးသေခြင်းတရားကိုပြန်လှည့်လာလိမ့်မယ်။ ထိုအခန့်မှန်း ... ငါပြီးပြီ fuck ဆိုတဲ့။ သူမ၏အတွင်းပိုင်း။ ပထမ ဦး ဆုံး fuck ဆိုတဲ့အချိန်သည်။ မိနစ် ၂၀ အတွင်းမှာပဲ။ ငါအရမ်းရယ်ရတယ်၊ NoFap ကအံ့ is စရာပါ။ porn fuck ဆိုတဲ့ Fuck ချွတ် jacking ။ ရပ်တန့်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီ။ ငါဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများသို့ပြန်သွားနိုင်တော့မည်မဟုတ်။ ဒါဟာစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ Fapstraunats ငါတို့ထက်ပိုကောင်းတယ်။
NoFap အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပြန်ဆုတ် DE
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၈ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်း DE ရောဂါလက္ခဏာများတိုးများလာနေသည်။ အစပိုင်းမှာတော့စိတ်သက်သာရုံပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ အဲဒီနောက်ကျွန်တော့်ဇနီးဟောင်းကအချိန်ယူရတာအရမ်းကြိတ်နေတယ်၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ PVI ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်လုံးဝမထွက်နိုင်တော့ဘူး။ လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်လုံးလုံး PMO နှင့်သာဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရည်းစားက Deathgrip ကိုဖျော်ဖြေဖို့သင်ယူခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့မလုံလောက်ဘူး။ Viagra ငါ့ကိုဂိမ်းထဲမှာထားရှိမည်, ဒါပေမယ့်ငါဂိုးသွင်းဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ ငါစိတ်ပျက်မိကြောင်းနှင့်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလည်းစိတ်ပျက်ခဲ့ကြသည်။ ဒါမှမဟုတ်ရုံထွက် weirded ။ NoFap ကိုနှစ်နဲ့ချီကြိုးစားခဲ့ပြီးပါပြီ။ NoFap တစ်ပတ်အကြာရလဒ်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ထိရောက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတော့ဘူး။
လွန်ခဲ့သောသုံးပတ်ကဤအုပ်စုကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိပြီးနောက်၎င်းသည်ပိုမိုကြာရှည်မည်ဟုကြားသိခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် fix ဖို့အများကြီးပိုရှည်။ ဒါနဲ့ NoFap ကိုအကြံပေးခဲ့တယ်။ ဒါကရက်သတ္တပတ်သုံးပတ်ကြာပေမယ့်မနေ့ညက PVI နဲ့အော်ဂင်စလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါမျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီးကြာခဲ့တယ်။ ထိုအခါအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုယူ။ သို့သော်လည်းငါသည် porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲချွတ်ဖို့ amble ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအဓိကထောင့်လှည့်ကြပြီထင်ပါတယ်။ ပထမတော့ငါသံသယရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါအလုပ်ဖြစ်တယ်။ သူကပြောတယ်၊ သူတို့၏အတွေ့အကြုံများကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်မှတ်ချက်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြသော fapstronauts အားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရက် ၉၀ အကုန်မှာငါခံစားနေရတာတွေကိုမျှော်လင့်နေတယ်။
ငါဟာယနေ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးလိင်ဆက်ဆံမှုအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအပျိုစင်ဘဝကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ လိင်ဆက်ဆံမှုပြုစဉ်ကတည်းကငါလိင်အင်္ဂါဖြတ်တောက်မှုကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ အသက် ၆ နှစ်အရွယ်ကတည်းကဖြစ်ခဲ့တာ၊ ၁၃ နှစ်အရွယ်မှာအွန်လိုင်းမှာညစ်ညမ်းတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာဘယ်တော့မှမတူခဲ့ဘူး။
ကောင်းပြီ, ငါနောက်ဆုံးတော့ထိုသို့ပြုကြသည်နှင့်ကလုံးဝအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Is သက်သက်သာဘဝမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အကျော် 50 နေ့ရက်ကာလအဘို့ porn မှ fapping နှင့် fapping ရှောင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒီအလုပ်လုပ်တယ် DE / RE ... ရှိသည်။
ငါအခုပျော်နေပါပြီ ဒါကမင်းအတွက်နောက်ခံအချက်အလက်အနည်းငယ်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၅ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့သည့်ညအထိမိန်းကလေးတစ်ယောက်၏မျက်မှောက်၌ O'd ကိုတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ဖူးပါ။ ငါလိင်ဆက်ဆံတာအကြိမ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပေမယ့်ဘယ်သောအခါမှမဆိုလှုံ့ဆော်မှုတစုံတရာမှအထွတ်အထိပ်သို့ချဉ်းကပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဖူးဘူး။
ငါအသက် ၁၅ နှစ်ဝန်းကျင်ကနေအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအထိ PMOing လိုမင်းလိုအများစုလိုစတင်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုအခုသိရင် ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးလိင်မှုအတွေ့အကြုံမှာကျွန်ုပ် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်နိုင်သည့်ချန်ပီယံဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေဆဲဖြစ်ပြီး O'd မရှိသေးသည့်အချိန်အထိ။ ငါနောက်တဖန်ဒီမိန်းကလေးနှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်အတူတူပင်ရလဒ်။ ငါတစ်ခုခုမှားနေတယ်လို့ခံစားမိပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာငါဟာဒီလောက်ကြာရှည်စွာနေနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါဒါကိုငါ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အကျင့်လို့ဘယ်တော့မှမမှတ်ဘူး။
ကျွန်ုပ်အသက် ၂၁ နှစ်သို့ရောက်သောအခါအစာရှောင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ DE သည်ဤဆက်နွယ်မှုကိုပျက်စီးစေသည်ဟုပြောရန်စိတ်ချရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ DE သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြိုပျက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုဘယ်သောအခါမျှမပြောခဲ့ပါ၊ သို့သော်လိင်ဆက်ဆံခြင်းများမအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းနှင့်သူမကိုယ်သူမအပြစ်တင်ခဲ့သည့်မျက်ရည်များကျပြီးသည့်နောက်တွင်သူမသည်ကျွန်ုပ်အားပြီးဆုံးသွားစေခဲ့သည်။ ငါဒါကြောင့်ခဲ့မျှမျှတတအချို့ပေါ့။ တစ်ခုခုမှားနေတာကိုငါသိတယ် ငါမလှုံ့ဆော်မှုမခံစားရနိုင်ဘူး ငါပထမ ဦး ဆုံးသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုရှာသောအခါ။ ငါ DE / RE အကြောင်းကိုထွက်ရှာတွေ့ပေမယ့်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတကယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ဆီသွားခဲ့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါအလည်အပတ်ရောက်ဖို့အလုံအလောက်ယုံကြည်မှုမရှိဘူး၊ PMO ဆိုတာဘာမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ NoFap နဲ့ YourBrainOnPorn ကိုသာပြန်ရှာတွေ့မှသာလျှင်ကျွန်ုပ်သည်နောင်လာမည့် ၄ နှစ်တာကာလကိုလူမှုရေးအရအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများကိုစိတ်မ ၀ င်စားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
၂၀၁၂ ခုနှစ်နှစ်သစ်သို့ကူးသွားသည်။ အချို့သူများ NoFap တွင်ဘာကြောင့်ပါ ၀ င်နေသည်ကိုသင်အပြည့်အဝနားမလည်ပါက YourBrainOnPorn နှင့်သင်အားလုံးကြည့်သင့်သောဗီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ https://www.yourbrainonporn.com/about/your-brain-on-porn-in-the-news/garys-tedx-talk-the-great-porn-experiment-2012/ ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကတိပေးခဲ့တယ် NoFap ကိုစမ်းကြည့်မယ် အဲဒီအချိန်တုန်းကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုနဲ့မိုင် ၅၀၀ လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်းနေခဲ့တယ်။ ဒါကကျွန်တော့်ကို ၅ လခန့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါ်ခုန်ဆင်းလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါ PMO အရှုံးပေးရန်နှစ်သစ်ကူး resolution ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါ ၂၅ ရက်လောက်နေခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သွေးဆောင်မှုတွေကိုအလျှော့မပေးခဲ့ဘူး။ ငါဟောင်းနွမ်းအလေ့အကျင့်ကိုပြန်မသွားမှီတိုင်အောင်ငါ PMO မပါဘဲ 2012-500 ရက်ပတ်လုံးသာစုဝေးလိမ့်မယ်။
ငါနောက်ဆုံးမှာပြန်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ကတည်းကငါ့မိဘများနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ နွေ ဦး ရာသီမှာအမ်စတာဒမ်ကိုသွားပြီးအိမ်ထောင်ဖက်အချို့နဲ့ပြည့်တန်ဆာတစ် ဦး နဲ့အတူတိုးတက်မှုရှိသလားလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ငါတော်တော်မူးယစ်ဆေးဝါးခဲ့ပေမယ့် ၆၀% Hardon ကိုသာစုဆောင်းမိနိုင်ပြီး Oing နဲ့ဘယ်တော့မှမရင်းနှီးနိုင်ဘူးဆိုတာပြောနိုင်ပါတယ်။ ငါသိနှင့်ပြီးသားအဘယ်အရာကိုရှာဖွေရန်စျေးကြီးနည်းလမ်း ...
ငါအခြေခံအားဖြင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုအတုငါတိုးတက်လာဖို့ကွိုးစားပါမယ်လို့ပြန်ရတယ်အခါ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, လူမှုရေးအရ, စိတ်ပိုင်း, etc ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နှင့်နောက်ဆုံးမှာဒီယုံကြည်မှုသို့လှည့်။ ငါသည်တပွဲတော်နှင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးစစ်မှန်သောစိတ်ဝင်စားမှုများဖေါ်ပြခြင်းခံခဲ့ရသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာငါလိုအပ်နေခဲ့ရုံယုံကြည်မှုထပ်တိုးအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အသွား၏။ သူမစိတ်လှုပ်ရှားမှုမတည်မငြိမ်တစ်ဦး tad ထွက်လှည့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့တက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်အရာကိုမျှမကြင်နာ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း။
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အရက်ဆိုင်များကိုရိုက်ပြီးမိန်းကလေးများနှင့်စကားပြောပြီးနောက်ငါနောက်ဆုံး၌ငါဖြစ်ပျက်သောအဟောင်းကိုနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ညဥ့်နက်နေပြီ။ ငါကထိုအချိန်ကအရက်နှင့်စပ်ဆိုင်သော်လည်းငါ၌ ED နှင့် DE ပါသည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ ငါထပ်မံလွင့်သည်ဟုထင်ခဲ့သော်လည်းလိင်မခွဲခြားဘဲသူမသည်တကယ်ပျော်ခဲ့သည်။ အဲဒီညနောက်မှ nofap ကိုလုံး ၀ ကျူးလွန်မည်ဟုကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ငါမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူအိုဟင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်ငါလုံးဝမှာ O'ing မဟုတ်ပါဘူး။ သူမလာမယ့်သီတင်းပတ်အတွင်းသူမလာဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ ယောက်ျားတွေ၊ မင်းသာဒီအခြေအနေမျိုးရောက်နေရင်ငါ့ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပြီးပြောရရင်လုံးဝရိုးသားမှုရှိတယ်။ ငါသူမကိုအရာရာအားလုံးပြောပြပြီးသူမအမြဲစွမ်းဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းသူမနားလည်ကြောင်းသေချာစေခဲ့သည် သူမသည်အလွန်နားလည်သဘောပေါက်ပြီးပျော်ရွှင်မှုရှိနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဲဒီညနောက်ပိုင်းမှာတောင်မှကျွန်တော်သတိမထားမိခဲ့ဘူး၊ ကြိုတင်ပြီးကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးတဲ့နောက်မှာခက်ခက်ခဲခဲခဲယဉ်းခဲ့တယ်။ ED ဆိုတာမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါအရင်အရက်နှင့်အမ်စတာဒမ်အတွက်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အရက်ဖြစ်သည်ဟုငါထင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့ခံစားချက်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် DE နဲ့ DE မတူတာကစိတ်သက်သာစရာပါ။
ဤသည်မှာ ၃၅ ရက်ခန့်မျှသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလိင်ဆက်ဆံသော်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထွတ်အထိပ်ရောက်အောင်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအများကြီးပိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာတွေ့ခဲ့ရပြီးအတွေ့အကြုံတစ်ခုစီပြီးတဲ့နောက်မှာအိုဟင်နဲ့ပိုနီးကပ်လာတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါကနောက်ဆုံးကနောက်ဆုံးညဥ့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မိနစ် ၄၀ ခန့်လိင်ဆက်ဆံသော်လည်း PIV လိင်ဆက်ဆံစဉ်ငါလာခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ယုံကြည်မှုပါတကား။ နောက်တစ်နေ့မနက်မှာကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြတာပါ။ ငါဟာ ၃ ကြိမ်လောက်နီးစပ်ခဲ့ပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသော်လည်းပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်မကိုယုံကြည်မှုများစွာရှိစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် PM မပါဘဲ ၃၅ ရက်ပတ်ပတ်လည်ရှိပြီးမကြာမကြာထိုရောဂါများကိုမဖြေရန်မရည်ရွယ်ပါ။
TLDR; NoFap DE အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်! ဒါဟာအချိန်နှင့်သည်းခံခြင်းကြာ!
အကြှနျုပျ၏ပုံပြင်အောက်တိုဘာလအတွင်းကစတင်ခဲ့သည်။ ငါ blowjob သို့မဟုတ် handjob ကနေတစ်ခုသို့မဟုတ်လိင်အင်္ဂါအတွင်းမယ့်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ orgasm မဟုတ်နိုင်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါအဘယ်သူမျှမ FAP စတင်ခဲ့သည်။ ငါကြမ်းတမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအားဖြင့်, ငါ၏လိင်တံ၏ sensitivity ကိုများနှင့်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးနှစ်ပေါင်းငါ၏စိတ်ကိုအကြောင်းမရှိ၏ sensitivity ကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်!
25 ရက်ပေါင်းမှာငါပြန်ရောက်သွားတယ်နှင့်အများကြီးဒီထက်ကောင်းတဲ့အထိခိုက်မခံ AND EJACULATE နိုင်စွမ်းနဲ့,5နေ့ရက်ကာလအဘို့ masturbated ။ ငါ 17 ရက်ပေါင်းနောက်တဖန်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်တဖန်ပြန်ရောက်သွားတယ်။3နေ့ရက်ကာလအဘို့ Masturbated ။ (ငါယစ်မူးခဲ့) တစ်ညတစ်ဖန် ejaculate နိုင်ခြင်းရပ်, လိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးနောက်ပိုင်းတွင်, (မနေ့ကငါသည်အခြားမိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့နဲ့ကျွန်မအလွယ်တကူ blowjob / handjob veeeery မှတဆင့် EJACULATED !!!
အစ်ကိုတွေမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုအစဉ်အမြဲ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်! အဲဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ပြီးတော့အရာအားလုံးထက်ပိုကောင်းတယ်။
ငါမူလကအစီအစဉ်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်အောင်အရမ်းလိင်တီထွင်ခဲ့တယ်ငါမဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ NoFap ကျွန်မလိင်ဆက်ဆံရမည်မဟုတ်ပေ, ဒါပေမယ့်ငါသိအမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်နေ့လျှင်5အပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုအများကြီးဖေါ်ပြခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးအတူငါကလိုချင်ယူဆ။
ငါသည်ဤမတိုင်မှီသုံးအခြားလူများနှင့်အတူလိင်ခဲ့ကြပါပြီ, သူတို့အံ့သြစရာခဲ့ကြသည်သော်လည်း, ငါလိင်စဉ်အတွင်းထှတျအထိပျနိုငျခဲ့ဘယ်တော့မှကြီးကအရမ်းမဆိုအခြားနည်းလမ်းများမှတဆင့်အထွတ်အထိပ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းပြီ, ငါနေ့က5အပေါ်လိင်ဆက်ဆံတက်အဆုံးသတ်နှင့်အတူတူပင်ယေဘုယျအတွေ့အကြုံကိုနှင့်အတူရှိ၏။ အဘယ်သူမျှမထှတျအထိပျအားဖြင့်ထိုအတူပုံပြင်အောက်ပါတပတ်နောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
၂၅ ရက်တွင်သို့သော်ခဏကြာသော်ငြားဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတကယ်ကိုအံ့သြစရာပဲ! ဒါကတစုံတရာဖြစ်မဖြစ်ငါမသေချာပေမဲ့ 25 နေ့ ၂၉ sex မှာထပ်ပြီးလိင်ဆက်ဆံနေတုန်းပဲ
ငါ့ကိုငါနှစ်မိနစ်-လူကိုအစားအစဉ်အမြဲတည်တံ့ဖြစ်လာစေခြင်းငှါစိုးရိမ်, ဖြစ်ကောင်းတဲ့လိင်စှဲလမျးသူဖြစ်လာဖြစ်ကြောင်းကိုစိတ်မပူပါနဲ့, ဒါပေမယ့်လည်းများအတွက်အလုပ်လုပ်သောအရာကိုဖြစ်ပျက်များနှင့်အဆင်သင့်ကြည့်ရှုဖို့အဆင်သင့်, အခြို့သောအရာတို့ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်ကိုသိရန်၎င်း၏အကောင်း ငါလိုချင်တဲ့အရာ!
nofap မှရရှိသောအကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများမှာ (ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မ ၀ င်မီရက်ပေါင်း ၁၀၀၊ ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ပြည့်အောင်ငါပြီးခဲ့ပြီ) သည်လိင်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်သာလွန်သည်။ အတင်းအကျပ်ဖိနှိပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသော“ သေခြင်းတရား” ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ဦး ဆုံးအကြိမ်အနည်းငယ်ခံစားခဲ့ရသည်။ ငါဘယ်တော့မှကွန်ဒုံးနဲ့လာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ် အနည်းဆုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုမခံစားရဘဲမိနစ် ၃၀ မှ ၄၀ အထိသွားသည်။
အဘယ်သူမျှမ fap ခေတ်မှ Fast-Forward ။ ငါအလောင်းကိုထားရသောအခါ, ငါကမောက်ကမဖြစ်မှုမရှိဘဲစိတ်ကိုမှုတ်လိင်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အံ့သြစရာပဲ လက်အလုပ်များရခြင်းနှင့်အတူတူပင် - ကျွန်ုပ်သည်အလွန်တိကျသောချုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်နည်းစနစ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့သောကြောင့်မည်သည့်မိန်းကလေးကမျှကျွန်ုပ်အတွက်လှည့်စားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ no-fap ဖြင့်သင်လိုအပ်သော sensitivity ကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ပြီးမိန်းမများနှင့်အမှန်တကယ်ကာမဆက်ဆံမှုကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်။
NoFap ငါ၏အမရဏဆုပ်ကိုင် / နှောင့်နှေးသုက်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ
ရုံ 100 ရက်ပေါင်းကျော်အကြာဈကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံး blowjob ခဲ့ပြီးအရာခံစားရပါဘူး။ အခုတော့ကိုယ်သူတို့ထံမှအလွန်လွယ်ကူစွာဖြစ်ချင်နိုင်ပါတယ်။ တော်တော်လေးသေချာသေခြင်းချုပ်ကိုင်ထားခဲ့ပါတယ်နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်, NoFap ကပျောက်ကင်းအောင်ကုသဖြစ်စေလမ်းနှောင့်နှေးဘူး။
ငါနောက်ကျနေတဲ့သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့် porn / fap စွဲလမ်းမှုခံစားနေရတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ဤသည်မှာ Reddit သို့ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးပို့စ်ဖြစ်သည်။ ငါဒီကိုအရမ်းကူညီဖို့လာတာမင်းကိုသွားတွေ့တော့တာပဲ။ မဆိုအကြံဥာဏ်နှင့်ထောက်ခံမှုကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ ဒါ့အပြင်: AMA!
မင်္ဂလာပါသူချင်း fapstronauts ။ ဒါကျွန်တော့်ဇာတ်လမ်းပါ ငါရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ porn ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းမှတ်မိနိုင်ပြီး၊ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးကြိမ်ကြည့်ဖူးသည်ဟုစိတ်ချစွာပြောနိုင်သည်။ ကျွန်မဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာလိင်တူချင်းချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ကြိမ်ထက်မကအိပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငါလိင်ဆက်ဆံတိုင်းအချိန်တိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပေမယ့်တကယ့်ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကိုမတွေ့ခဲ့ဘူး၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက် (ယစ်မူးတဲ့ညတစ်ညမှာ) မှာအထီးကျန်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံ ED ကနေခံစားခဲ့ရတယ်။ ငါအမြဲမူးယစ်ဆေးဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရိုးရိုးငါနှင့်အတူရှိသောမိန်းကလေးနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ခြင်းမှဤအလျှော့ချ။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိရည်းစားနှင့်တွေ့ဆုံသောအခါအားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ ငါသူမချက်ချင်းပဲချက်ချင်းကျလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအတူတူအဆောက်အ ဦး မှာနေခဲ့ရတယ်။ ဆိုလိုတာကလိင်ဟာပုံမှန်ဖြစ်ပျက်မှုပါ။ ထိုအကအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ငါသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှေးကွေးခြင်းနှင့်အတူပြhaveနာတစ်ခုရှိစေခြင်းငှါအစဉ်အမြဲငါဝန်ခံခဲ့ရတယ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနာရီနဲ့နာရီသွားရနိုင်ပြီးနီးကပ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘယ်ငါ့ကိုအမြဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုချွတ်ပြီးအောင်ငါ့ကိုစွန့်ခွာပုံရသည်။ ငါလိုချင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုငါရနေဆဲဖြစ်သော်လည်းသင်နှင့်စစ်မှန်သောအရာမှသင်ရရှိသောရင်းနှီးမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဤတွင်မရှိခဲ့ပါ ကျွန်ုပ်သည် SO (4) နှစ်နှင့်အတူရှိနေခဲ့ပြီးပြit'sနာကိုဖြေရှင်းရန်အချိန်တန်ပြီဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ငါဟာတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်လွန်းတာကြောင့်ငါတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်ခဲ့တယ်။
ဖြစ်ချင်တော့၊ တစ်ညမှာကျွန်ုပ်အင်တာနက်ပုံမှန်ကြည့်ရင်းညစ်ညမ်းမှုကိုရှာဖွေနေသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန်အလေ့အကျင့်ဖြစ်သကဲ့သို့ "porn" ဟူသောစကားလုံးကို reddit သို့ရိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသေချာမသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါဒီ subreddit ကိုဖြတ်ပြီးလာကြ၏။ ငါပို့စ်များကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဤယောက်ျားတွေဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမယုံနိုင်တယ် ... အဘယ်ကြောင့် porn စွန့်လွှတ်? ရက်ပေါင်း ၉၀?! ပြီးတော့အဲဒီမှာပုံပြင်တွေ၊ ဒီနေရာမှာဘယ်လိုတိုးတက်လာပုံ၊ အဲဒီမှာဆက်ဆံရေးဘယ်လောက်တိုးတက်လာတယ်၊ DE နဲ့ ED နဲ့ဘယ်လိုကူညီခဲ့သလဲဆိုတာတွေဖတ်ခဲ့တယ်။ လတ်တလောနေ့ ၁၁ ရက်ရောက်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်အရမ်းခက်ခဲတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ My SO သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူပြီးထောက်ခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လိင်ဘဝသည်တိုးတက်နေပုံရသည် (ငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြင့်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်!) နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုအာရုံစိုက်ခံရပြီးသတိထားမိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ငါလည်းအကူအညီရပြီဆိုတာကိုလည်းစပြီးတွေးတောဆင်ခြင်သည်။
ဤသူသည်ငါအမျိုး, သင်နှင့် ups နှင့် Down နှင့်အတူအရာကြွင်းလေဝေမျှဖို့မျှော်လင့်, ငါ့ခရီးရုံက start ဖြစ်ပါတယ်။ ငါ့ကိုမဆိုမေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်မည်သည့်ထောက်ခံမှု / အကွံဉာဏျကိုအလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်လို့ပေးပါ။
၁၆၄ ရက် (အတင်းအဓမ္မ) ခက်ခက်ခဲခဲပြီးနောက်၊ နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်လက်ဖြင့်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နိုင်သည်။ မစိုးရိမ်ပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်လက်မဟုတ်ပါ။ ပြီးတော့ Man, ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကသူ့အရာထိမိလာတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးတစ်ယောက်လိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒါဟာတကယ်ကိုအံ့သြစရာပဲ။ စာသားကကျွန်တော့်ကိုမိနစ်အနည်းငယ်၊
အရင်တုန်းကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကငါ့ကိုအလုပ်တစ်ခုပေးရင်ဘယ်တော့မှသုတ်ရည်လွှတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ၁၅ မိနစ်ခန့်လိုလိုပင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကိုင်တွယ်ရမည့်လူနည်းစု။ ငါသူတို့ကုန်ခန်းသွားပြီဆိုတာမှတ်မိသေးတယ်၊ မကြာခင်မှာပဲသူတို့ကိုငါပဲပြောလိုက်မယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲဟာအလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလောက်အောင်ဖြစ်လာပြီးညစ်ညမ်းစိတ်ကိုစွဲစွဲလန်းလန်းလာကတည်းကငါ့ကိုအလုပ်တစ်ခုပေးနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးညဥ့်တစ်ခုလုံးကွဲပြားခြားနားသောဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျိုးခက်ခဲ mode ကို, NoFap Streak, ယခင်ကထက်ပိုမိုအားကောင်းနှင့်အစဉ်အမြဲတည်တံ့။ ကံကောင်းပါစေညီအစျကို
NoFap အကြောင်းကိုနှောင့်နှေးသုက်အောင်မြင်မှုပုံပြင် / Thoughts
ငါသည်ဤအလားတူအခြေအနေများ DE ကျော်လွှားနှင့် NoFap မှတဆင့်သွားသူများအတွက်အထောက်အကူတွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ငါနောက်ဆုံးတော့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမှရှောင်၏နှစ်ပတ်အတွင်းအပြီးမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအိပ်ရာမှာအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာအဓိပ္ပါယ်ရုန်းကန်ခဲ့ပေမယ့်ကနေငါထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ယေဘုယျယုံကြည်မှုအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးမီကအထိငါမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအိပ်ရာမှာလာတော့မှနိုင်ဘူး။ ငါသည်ငါ့လက်ရှိရည်းစားနှင့်အတူအော်ဂဇင်ရောက်ရှိမပဉ်စအချိန်ပြီးနောက်စသည်တို့ကို NoFap, Yourbrainonporn, မှတစ်ဆင့် DE အကြောင်းကိုထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်းမတိုင်မီကအစဉ်အမြဲငါ climaxing မရှိအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအခြားသုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ပျက်စရာနှင့်ငါ၏ယုံကြည်ကိုးစားဖို့ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်။ လေးနက်သောစိတ်ကျရောဂါငါသည်ဤကျော်လွှားဘယ်တော့မှစေခြင်းငှါထွက်ရှာတွေ့အတွက်ကန်ဖို့စတင်ခဲ့ပေမယ့်ငါ DE အဆုံးသတ်ထားရန်ငါ၌ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ငါ NoFap နှင့် YBOP ရှာဖွေတွေ့ရှိငါ၏အသုတေသနပြုနှင့်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်ခက်ခဲ mode ကိုသွားကြဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ တစ်ခုခုပြုရတယ်, ငါ, ငါ့ရည်းစားဆုံးရှုံးအကျိုးစီးပွားခံစားနိုင်ပေမယ့်သူမသည်ငါနှင့်အတူလူနာကြီးကအားဖွငျ့အကြှနျုပျကူညီပေးခဲ့သည်။ နှစ်ပတ်အတွင်းပြီးနောက်ကျွန်တော်ပြန်မှာပါ သွား. ငါအကြောင်းကို5မိနစ်အကြာတွင် orgasmed ။ ကျွန်မစိုးရိမ်, အဆိုးမြင်စိတ်တွေများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏ကြီးမားမြင့်တက်ငါ့ကိုပယ်ဆွဲထုတ်သလိုခံစားရတယ်။ ကျွန်မရံဖန်ရံခါငါငါလာယခုအချိန်တွင်ပြုသကဲ့သို့အဖြစ်ပျော်ရွှင်ခံစားခဲ့ရပါပြီ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲ။
အတွေ့အကြုံအပေါ်ငါ၏အကြံအစည်နည်းနည်းမှိုင်းပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ငါကအကြောင်းရေးပါမယ်လို့အခါက start မှာ 100% ရိုးသားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။
ငါ "စူပါပါဝါ" မတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပေမယ့်အနည်းငယ်တိုးနှင့်အာရုံများ၏အသိအမြင်။ NoFap မှာငါစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားမယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ၂-၃ ရက်လောက်နေရင်ငါအရမ်းဝါယာကြိုး၊ အရမ်းချိုပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ဒါတွေအားလုံးဟာ ၅ ရက်အတွင်းမှာစဲသွားတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာကျွန်မမှာ "flatline" ဒဏ်ကိုခံရပြီးလိင်စိတ်နည်းနေသော်လည်းအလုပ်၊ ကျောင်းနှင့်ဘဝအကြောင်းကိုကောင်းစွာအာရုံစိုက်သည်။ ငါအများကြီးပြုမိခဲ့သည်အချိန်တွင်ငါ့ထံသို့အမှန်တကယ်မသိသော စိတ်ဖိစီးမှုများပြားလာခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမှတစ်ဆင့်ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်သောစိတ်ဖိစီးမှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ဤ inertia သို့ပြန်ဆိုခဲ့သည်။ ဒါကခက်ခဲတဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေတလျှောက်လုံးမှာကြာရှည်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတော့ငါလိင်ကိစ္စမှလွတ်မြောက်လာတယ်။ ငါ DE နှင့်အတူရုန်းကန်နေရတဲ့အများအားဖြင့်“ သေခြင်းတရား” နှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အပတ် ၁ မှာပတ်ပတ်လည်မှာပြန်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတာကသိသာထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာမိန်းကလေးတွေကိုကြည့်ရုံနဲ့မရပ်မနားထိတွေ့နေတတ်ပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့စိတ်အေးသွားတယ်။ ဤအတွေ့အကြုံမှကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည့်အရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်စတင်ခဲ့သည့်နေ့မှ စ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုနှစ်ပတ်တာမျှမလုပ်ခဲ့ဖူးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယခုငါလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်နှင့်ငါရည်းစားမရှိတော့သည့်အချိန်တွင်ဝေးဝေးနေရန်ရွေးချယ်လိုက်သည်။ အာရုံစိုက်သည်အရေးကြီး၏။
ငါသည်ဤအလုပ်ကိုသေချာဘို့အလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ပွင့်လင်းစိတ်ထဲရှိသည်, ကျော်ကြောင်းထင်နှင့်အငယ်စားရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် (ကအချိန်ကတနေ့တဆင့်ရတဲ့) ကိုထိန်းသိမ်းရန်ပါဘူး။
၇၂ ရက် MO အခမဲ့နှင့် ၁၁၄ ရက်အခမဲ့ရုပ်ပုံကားချပ်ပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမနေ့ညကငါ့ကိုအော်ဂဇင်ပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာလိင်အပေါ်အပြည့်အဝမဟုတ်ခဲ့, ရုံ BJ ဒါပေမယ့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်၎င်းကိုကြိုးစားရန်ပဉ္စမမြောက်မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ရန်တစ်ခုတည်းသောဖြစ်သည်။ ကျန်တဲ့လေးယောက်ကတော့ငါညစ်ညမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်။
NoFap အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ရွှင်လန်း။ / POS
တစ်ဦးကစုံတွဲတစ်တွဲနာရီအကြာကျွန်မလိင်စဉ်အတွင်းပြုမိဖူးဘူးတစ်ခုခု [ဖြစ်နိုင်သောခလုတ်] လုပ်ခဲ့တယ်
အဆုံး၌အဆင်မပြေ, ရှည်လျားလွန်း, အဆုံးမှာလူရှုပ်ရန်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ငါ့ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေတဲ့ဘာမှမှမရှိပေမယ့် nofap ။ အံ့သြစရာပါပဲ ဘယ်တော့မှပြန်မသွားနဲ့ သူမအတွက်အမှန်တကယ် LASTING ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ဖို့ကြိုးစားမည့်အစား၊ ယခုသူ့အတွက်တကယ်လုပ်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။
Hardmode ရှိသူသို့မဟုတ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်မပါဘဲလူတိုင်းအတွက်ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ အပြောင်းအလဲများရှိနေကြသည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာကျိုးနပ်။ PMO မပါဘဲဘဝသည်သာလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ED နှင့် Delayed သုက်လွှတ် - 1.5 နှစ်ကျော်နှေးကွေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး: ဒီနေရာမှာငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့သောအရာကို။
အိုင်တီဒါဟာ F ကို * ကို C * အကျင့်ကိုကျင့် ing, အလုပ်လုပ်! 14 + ရက်အကြာမှာ!
ကောင်းပြီငါ့ဘ ၀ ၌ပထမဆုံးအကြိမ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ၌အော်ဂဇင်ကိုအောင်မြင်စွာအောင်မြင်နိုင်ခဲ့ပြီ၊ ထိုမိန်းမသည်ကျွန်ုပ်၏နားလည်သောအံ့သြဖွယ်ချစ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဘဝကိုကျွန်ုပ်၏ PMO စွဲလမ်းမှုကလွှမ်းမိုးထားသည်။ အချို့သူများအတွက်မူယင်းသည်ရယ်စရာဖြစ်ပုံရသည်၊ သို့သော်သက်ကြီးရွယ်အိုများ ၀ န်းရံထားသည့်ကလေးတွေအိမ်၌ရှိနေခြင်းကကျွန်ုပ်သည်သဘာဝအလျောက် porn အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါ့ကိုစမ်းသပ်တဲ့အချိန်အထိငါ့ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ အရာအားလုံးကိုပျက်စီးစေသောနည်းလမ်း…
တခါတရံ ၁-၂ ပတ်တိုင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်သော်လည်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါသာသိလျှင်၊
ကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုစတင်တဲ့အခါပြwasနာတစ်ခုရှိခဲ့တယ်၊ သူမအတွင်းမှာအော်ဂဇင်မပေးနိုင်ဘူး၊ ၇ လအရွယ်ကျွန်မရဲ့ရည်းစားကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါကျွန်မရဲ့ NoFap ကြိုးပမ်းမှုကစတင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒါကငါ့ကိုတန်ဖိုးမရှိသူနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအတွေ့အကြုံတိုင်းမှာပျော့ပြောင်းသွားစေတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်သူမမှာအချိန်ကောင်းရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုငါပြောနိုင်ပါတယ်။ လအတော်ကြာကြာသူမကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲပြီးတဲ့နောက်ငါဟာအလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒီခရီးဟာငါအချိန်ကြာမြင့်စွာစတင်ရန်လိုအပ်သောအရာဖြစ်ပြီး၊ PORN၊ MASTURBATION နှင့် ORGASM မပါ ၀ င်ပါ။ ဒီတစ်ခုတည်းသန်လျက်ရှိသည် , ငါ့လိင်ဘဝကိုဖျက်ဆီး။ သို့သော် NoFap လုပ်ပြီး ၁၀ ရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံး၌အမျိုးသမီးတစ် ဦး ထဲဝင်လာသည်။ ၁၀ ရက်အတွင်းကျွန်ုပ်ဘဝပြောင်းလဲသွားသည်။ ငါ ၁၀ ရက်ပဲရှိသေးတယ်ငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကဆက်ရှိနေဆဲငါသိတယ်၊ ငါကျန်ရှိနေသေးတဲ့ PMO'ing ကိုရှောင်ပါတော့မယ်။f* ck ပြန်ပြောမိတယ်။ ဒါကြောင့်ငါအသက်ရှင်နေလို့ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ခံစားရတယ်။ အဘယ်သူမျှမ FAP အကျင့်ကိုကျင့်, သင်တို့ကိုငါကတိပေး! ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။
thread: အနားသတ် အကျိုးခံစားခွင့်များ [ချည်မျှင်များ မရနိုင်တော့ပါ]
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် (၆) နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့သည် အစဉ်မပြတ်ငါသူမကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမှန်တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနှင့်သူမ၏သတ္တုတွင်းကိုခေါ်ခြင်းကံကောင်းခြင်းလို့ထင်ပါတယ်။ PMO ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးဒီစွန့်စားမှုကိုစကတည်းကသူမကိုအရင်ကထက်ပိုမိုချစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ငါနေဆဲ masturbating မဟုတ်, ငါ sex အကြောင်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ထင်ပါတယ်။ ငါ၏အအတွေးအခေါ်တွေသော်လည်းပြောင်းလဲသွားပြီဘယ်မှာယခုပငျငါ့စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်အလိုဆန္ဒများသူမ၏အပေါ်လုံးဝအာရုံစိုက်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ယခင်ကငါနေရာတိုင်းလိင်မြင်နေခဲ့ပါတယ် !! အမြင်သို့ကြွလာတော်ရင်သားအမျိုးမျိုးရှိသမျှ pair တစုံ, စိစစ်အောက်တွင်တိုင်း backside စစ်ဆေးရေးထိုက်ခဲ့ရာသီဥတုပိုမိုပူနွေးရရှိသွားတဲ့နှင့်အဝတ်ကိုပိုမိုထှနျးဖြစ်လာသကဲ့သို့စင်ကြယ်သောငါ၏အကြံအစည်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်လာခဲ့သည်။
စနေနေ့တွင်, ကိုယ့်သူတွေကိုစိတ်ခံစားမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်အမှန်တကယ်သတိပြုမိဘာမှသို့မဟုတ်မည်သူမဆို hadnt ထားတဲ့အတွက်သောကြာနေ့ပြီးနောက်ကိုယ်ထိန်းအကွပ်မရှိ frisky စနေနေ့နံနက်ပိုင်းတွင်အလုပ်ထ။ ငါသို့သော်အစားငါသည်ငါ၏အဖော်အပေါ်ငါ့လက်ကိုရတဲ့အကြောင်းကိုအိပ်မက်အလုပ်တစ်ရက်မှာစနေနေ့သုံးစွဲ, ဖြတ်သွားဖြတ်လာအပေါ်စူးစမ်းမရှာခဲ့ပါဘူး။ ငါသူမကိုကျွန်မရဲ့ခံစားချက်တွေကို texted ပြောဆိုရန်ဒါရေစမ်းသပ်ပြီး, ငါဖြစ်သကဲ့သို့သူမ၏နည်းတူစိတ်အားထက်သန်တွေ့ရှိရန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။
ငါအိမ်ပြန်ကြောင်း evenimg တယ်ကျနော်တို့ငါအောင်မြင်စွာပုံမှန်အစည်းအဝေးထိုးဖောက်မှုမှတဆင့် ejaculated ထားတဲ့ကာလအတွင်းစိတ်ကူးလိင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအံ့သြစရာများနှင့်နီးပါးအင်အားစိုက်ထုတ်ခဲ့သည်။ ငါလုံးဝကျေနပ်မှုနှင့်ပုံမှန်ပြန်တဲ့ခံစားမှုထံသို့သွားလေ၏။
ငါသည်ဤခရီးစတင်မှီတိုင်အောင်, ငါ့ရမ္မက် PMO မှတဆင့်ကျေနပ်မှုဖြစ်ရပြီလိုခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကိုယ်လုံးတီးအမျိုးသမီး nameless ဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ mindlessly စောင့်ရှောက်ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤအချိန်, ငါ၏စိတ်နှင့်ငါ့ကိုယ်ငါ့အဖက်နှင့်ဤတတ်ပြီးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်ထံမှစစ်မှန်သောဆက်သွယ်မှုများနှင့်အမှန်တကယ်ရငျးနှီးရှာ၏။
ရိုးရှင်းသောအသံပေမယ့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောခံစားချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ PMO ဗလာငါ့ကိုစွန့်ပစ်ရာအရပ်, ဒါဟာအကြှနျုပျကိုခြီဖွညျ့လေ၏။ NoFap ရုံရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်ပိုပါတယ်။ ဒါဟာတကယ်သင်ဖြစ်နိုင်ပေါ်တက်ပေးထားခဲ့သောနည်းလမ်းပိုမိုနီးကပ်စွာသင့်ရဲ့ချစ်ရသူရန်သင့်အားဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။
CHAP မယ် Keep !!
တွေ့ရှိချက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှု ၅၈ ရက်အကြာ HardMode - ငါ HardMode ကိုဒီကနေဆက်နေသင့်သလား။
ခေါင်းစဉ်မှာကဲ့သို့ငါလိင်ဆက်ဆံမတိုင်မီ Hardmode အပေါ် 58 ရက်သွား၏။ ငါမဆဲသေးဘူး၊ ငါ့ရည်ရွယ်ချက်က HardMode ကိုဘယ်တော့မှမသွားဘူး၊ ငါကောင်မလေးကိုအများဆုံးနို့စို့လိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာငါ့ကောင်တာကိုဆက်ထိန်းထားလိမ့်မယ်။
ငါ၏အ post ကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်, လိင်နှင့်စဉ်အတွင်း ဦး ဆောင်အရာစုံတွဲတစ်တွဲအားဖြင့်ငါအလွန်အံ့သြသွားတယ်။ 1. တက်ခြင်း - ငါသာခက်ခဲဖြစ်ခြင်းမှအပျော်အပါးရသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်၏ sensitivity သည်မြင့်တက်လာသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီ။
နံပါတ် ၁ က nofap ကိုခက်ခဲစေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ horny ဖြစ်တဲ့အခါငါအရမ်းသဘောကျလို့ပိုလို့ချိုလာတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါစားပွဲပေါ်မှာထိုင်နေတုန်းအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ဖို့ခက်ခဲမယ်၊
လိင်မှုကိစ္စမှာသူမငါ့ကိုတို့ထိလိုက်တာနဲ့သူမနဲ့သူမလိင်ဆက်ဆံဖို့စိတ်မ ၀ င်စားဘဲချက်ချင်းရောက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါကြည့်လိုက်ရင် ၅၈ ရက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ ငါနဲ့အတူမြန်ဆန်တော့မယ်။ ” ဒါပေမယ့်ငါတကယ်စိုးရိမ်မိတာကလာမယ့်တကယ့်အချိန်ကိုယူခဲ့တယ်။
ငါလက်ျာဘက်အကြောင်းကိုပျော်ရွှင်ရပါမည်နည်း ကျွန်မသူမ 30 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိမ်ရောက်လာသည်နေချိန်မှာငါကအနည်းဆုံး3မိနစ်ကြာမြင့်ထင်ပါတယ်။
ဤအရာအလုံးစုံပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းငါ HardMode တွင်ပိုမိုအချိန်ဖြုန်းသင့်သလဲ ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာပြုခဲ့သောအချက်ကို, ငါ့ယခင်ပြင်းထန်သော fapping အလေ့အကျင့်များနှင့် porn စွဲ၏ရလဒ်လား? ငါဆဲမရသေးသောအရာတစ်ခုခု? ဒါမှမဟုတ်သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အခါမဖြစ်သင့်ပုံလား။ အနည်းဆုံးတော့အဲဒီမှာကျုပ်ရဲ့ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုက fapping ဟာအချိန်မတန်သေးတဲ့အကြောင်းအရင်းဖြစ်လို့လား။
ငါ nofap စတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုစတာတွေအပြင်ငါဟာငါနဲ့မိန်းကလေးဘာပဲလုပ်လုပ်ငါမလာနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလိင်ဆက်ဆံခဲ့တာတွေကြောင့်ပဲ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ပြproblemsနာတွေရောထွေးနေသလိုခံစားရတယ်။
အောင်မြင်မှု - DE ပြီးပြီ ပထမအကြိမ် SOOOO တွင်ပုံမှန် cumming
အောင်မြင်ပါပြီ !!! ဤမျှကာလပတ်လုံးအတွက် cumming ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်! ငါရေးသည်ကိုမယုံနိုင်ဘူး၊ အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီဟုငါခံစားမိသည်။ PMO မစတင်သည့် နေ့မှစ၍ ၁၀ ရက်ရှိခဲ့သည်။ ငါ DE မှအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပြီးနောက်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်လုပ်နိုင်သည်ကိုအစဉ်သိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌ထိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံဖူးသလားဆိုသည်မှာသေချာပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်ညကကျွန်ုပ်၏ GF အသစ်ဖြင့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအော်ဂဇင်ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒါဟာ doggie အနေအထားအတွက်ထိုးဖောက်မှုကနေဖြစ်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့အကူအညီတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၏သင်တန်းငါအိုနှင့်အတူလာမယ့်ဖြစ်ပျက်အဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးရှိသည်ဒါပေမယ့်ငါသေချာအဘို့အရာတစျခုသိမျှ P နှင့်မျှမအမ်သူမကအတွေ့အကြုံအတွက် shared ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဖြစ်ခဲ့သည်သကဲ့သို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါတော့ဘူးတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှုံးသမားများကဲ့သို့ခံစားရသို့မဟုတ်ပဲ "ဒါဟာနှင့်အတူလိုက်" နှင့်ကလကျခံဖို့ရှိပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးကမပေးပါဘူး။ ငါကပုံမှန်ဖြစ်ခြင်းနိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းကိုယခုငါသိ၏။
ငါမယုံနိုင်ဘူး ဒါဟာအိပ်မက်တစ်ခုနဲ့တူတယ်။ လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည် nofap လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားပုံမှန်သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေနိုင်သည်ဟုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကငါပုံမှန်သုတ်ရည်လွှတ်ခဲ့ 4th အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ တကယ်ကြီးကျယ်တဲ့အရာကဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ။
ကျွန်မရဲ့ GF နဲ့ကျွန်မဟာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ပြီးသူမကကျွန်မကို O နိုင်ခဲ့တယ်၊ ငါပေါက်ကွဲမယ်လို့ထင်ပေမယ့်ငါ့စိုက်ထူဆုံးရှုံးသွားတယ်။ ကျွန်မတို့ခဏအိပ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ကိုစိုက်ထူပြီးအခြေခံအားဖြင့်သူ့ကိုခရစ်ယာန်သာသနာပြုမှာတပ်ခဲ့တယ်။ ငါဘာမှစဉ်းစားမနေခဲ့ဘူးရစ်သမ်နှင့်ကဘယ်လိုခံစားရတယ်5မိနစ်ခန့်အတွင်းငါသူမ၏အတွင်းပိုင်းပေါက်ကွဲ။ ဒါကအခြားယောက်ျားတွေအားလုံးအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်ပုံရပေမယ့်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒါဟာအံ့ဖွယ်ပါပဲ။
ငါ BJ သို့မဟုတ် HJ မှဤလုပ်ရန်မရှိသေးပါသို့သော်မကြာမီဖြစ်ပျက်လာမည်ကိုသာစိတ်ကူးနိုင်သည်။ သင်၏ထောက်ခံမှုအားလုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မိမိကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းသည်အချိန်တိုင်းသူနှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုခြင်းမဟုတ်ပါဟုသူအားကျွန်ုပ်မည်သို့သက်သေပြရသနည်း။ သူကရံဖန်ရံခါသူကထလိုက်ရင်ငါအလေးအနက်ထားမှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုလိင်ဆက်ဆံတာထက်သူလုပ်တာထက် ၉၅% ပိုလုပ်မယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ရှားရှားပါးပါးအချိန်ကလွဲလို့သူ့ကိုအော်ဂဇင်လုပ်လို့မရဘူးလို့ကျွန်မခံစားရတယ်။ ငါလုံးဝလိင်ကိုရှောင်ရှားရန်နီးကပ်နေပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတကယ်ညာဘက်ကိုသာလိုအပ်တယ်။ ငါကျိန်းသေနာကြည်းမှု (နှင့်စိတ်နာကျင်မှုများစွာ) ကိုတည်ဆောက်နေပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူနှင့်မည်သို့စကားပြောရမည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။
“ ဟေ့ရည်းစား၊ PIV ကဘာလို့အော်ဂဇင်မလုပ်တာလဲသိလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကသေဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အရာပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါနဲ့လိင်ကိစ္စလုံးဝမခံစားရဘူး။ ငါလည်းနင့်ကိုလိုချင်တာတွေလျောင်းနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုညှပ်လိုက်တာနဲ့ငါ့ကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေတယ်။ ”
တစ်နည်းနည်းနဲ့, ့ကြမ်းတမ်းပုံရသည်။ ကူညီပါ?
သူမသည်နာကျင်ခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်းနှင့်နာကြည်းခြင်းများစွာခံစားရသည်။ ငါတို့မူကား၊ ကျွန်ုပ်၏ပြန်လည်နာလန်ထူရေးအတွက် Nofap နှင့် noporn တို့သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ငါသည်ဤအတိအကျတူညီသောအရာမှတဆင့်သွားလေ၏။ ငါသူ့ကိုပြောပြရန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်ငါအတိုးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်လို့သူ့ကိုသတိပေးခဲ့တယ် သူကငါ့ကိုအလေးအနက်မထားဟန်မထားဘူး။ ငါ left နှင့်အဘယ်ကြောင့်ငါစွန့်ခွာရန်သူ clueless ။ "ငါကအမှုအရာကောင်းစွာသွားကြသည်ထင်။ " တကယ်လား ကောင်းပြီ၊ မင်းကိုသေလောက်အောင်ချုပ်နှောင်ထားလို့မင်းကိုငါမလွှတ်နိုင်တော့ဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းကကိုယ့်ကိုကိုယ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးကိုယ့်လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းရင်းအိပ်ပျော်သွားချင်တယ် ကျွန်မဆိုလိုတာကအသံပဲဒါပေမယ့်သူ့ကိုသူ့ကို nofap နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးလူတစ်ယောက်လိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်။ ငါအရာအားလုံးနှင့်ပတ်သက်။ အလွန်နာကျင်ခြင်းနှင့်မလုံခြုံခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသဘောပေါက်လာတယ်၊ ဘာလို့ငါ့ကိုဒီလိုခံစားချက်မျိုးပေးစေချင်တာလဲ။ ငါရထိုက်တယ်ဆိုတာကိုငါသဘောပေါက်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။
မင်းရည်းစားရှိရာငါရောက်နေပြီ ငါအပြောင်းအလဲမလုပ်ခင်တစ်နှစ်အကြာမှာ anorgasmic ဖြစ်ခဲ့တာ၊ အချိန်ယူရလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်သူပြောင်းချင်တဲ့အချိန်မှာပိုကောင်းလာတယ်။ ငါထင်တယ်အဖြေကသင်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည် သူနှင့်အတူထိုင်။ သင်၏ပြissuesနာများကိုရှင်းပြပါ။ မင်းစိတ်ထိခိုက်နေတယ်၊ ​​သူလည်းသိမှာပေါ့။ သူလိုငါလိုအရာတစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့ရင်သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားမိပြီးစိတ်မပျက်ဖြစ်နေတယ်၊
ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာကအော်ဂဇင်ကိုညီမျှခြင်းထဲကထုတ်ယူဖို့ပဲ။ ငါသေခြင်းချုပ်ကိုင်မထားဘူး၊ ငါအတင်းမခိုင်းဘူး၊ ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကငါ့ရဲ့ပြproblemsနာတွေကသူမအမှားမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ခဲ့တယ် အဲ့တာမဖြစ်ခဲ့ရင်ငါရပ်လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါဟာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်
မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ငါမှာထပ်တူထပ်မျှကိစ္စရပ်တွေရှိနေတယ်၊ ​​ငါကလက်နဲ့အစားထိုးမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကနာကျင်တယ်၊ မလိုအပ်ဘူးလို့ငါမထင်ခဲ့ဘူး။ သူကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကလိင်ဌာနမှာကျွန်တော့်ကိုလုံးဝအသုံးမဝင်ဘူးလို့အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါကသူ့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေတယ်။ အဘယ်အရာကိုမျှဖြေရှင်းခြင်းမရှိပါ ဤအရာကိုအမှန်တကယ်ပင်ငြီးငွေ့နေပြီးမည်သည့်နေရာ၌ပင်ပြောဆိုနေပါစေ၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး အပေါ်သင်၏လက်ကိုတင်ခြင်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်ပါ။
ဤသည်အလွန်အမင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ စနေနေ့မှာငါ nofap စတင်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်းကြောင့်မင်းဟာငါ့ရဲ့ GF မဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါက PMO ကိုလုံးဝရှောင်ရှားဖို့ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်လက်ဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကအမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကဲ့သို့အဘယ်အရာကိုမျှမခံစားရပါ။ ငါဟာငါ့လက်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်တဲ့အတွက်အစစ်အမှန်လိင်ကနေတူညီတဲ့အပျော်သဘောကိုမရရှိနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ် ငါစစ်မှန်တဲ့လိင်ကိုရွေးပါ့မယ်။
ယောက်ျားများနှင့်မိန်းကလေးဟေ့။ ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ။ အဘယ်သူမျှမ FAP အလုပ်လုပ်! ဒါဟာငါ့အလိင်ဘဝကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, ကျွန်မသူမဖော်ပြနေသည်တူညီတဲ့ပြဿနာရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ 42 နေ့ရက်ကာလအဘို့အဘယ်သူမျှမ FAP အဘယ်သူမျှမ Porn ပြုလုလင်ပျိုလိင်မယုံနိုင်စရာကြီးနဲ့ကျွန်မပုံမှန်လိင်မှတဆင့်မှာအားလုံး orgasm နိုင်ဘူးသောအခါငါမတိုင်မီမတူပဲတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးထက်နောက်ဆုံးပိုပြီး couldnt ။
ငါမကြာမီအဘယ်သူမျှမ FAP နဲ့ငါ့ updated အတွေ့အကြုံကို post မည်သင်တို့ရှိသမျှကိုငါဖတ်ရမျှော်လင့်ပါတယ်!
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ လကမင်းရဲ့ချစ်သူရည်းစားတွေဖိနပ်စီးခဲ့ဖူးတယ် မိနစ် ၂၀ ကွာဝေးကွာသွားနိုင်ပေမယ့်ဘယ်တော့မှမပြီးနိုင်တော့ဘူး။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် fap နှင့် porn မပါ ၀ င်ပါ။
ငါက၎င်း၏အခြားမည်သည့်စွဲတူသောသူကိုတကယ်ပြောင်းလဲချင်သော program တစ်ခုကပ်နှင့်အချိန်အတွင်းသူ wont တစ်ဦးအသေခံချုပ်ကိုင်ထားချင်မှရှိတယ်ထင်ပါတယ်။
သငျသညျယောက်ျားတွေအတူတကွရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းရတယ်, ဒီရုံမကြာသေးခင်ကအရာဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကအမြဲသူ့ကိုအဘို့အကြောင်းလမ်းခဲ့ဖူးပါသလော သူကယ့်ကိုမှလိုလားပါလျှင်သူသည်သင်တို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်စဉ်းစားခြင်းထက်ကျော်ရစေခြင်းငှါဒါငါသည်ငါ့ရည်းစားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးရှေ့တော်၌အစဉ်အမြဲငါ့အဘို့ကြောင်းလမ်းခဲ့သည်။
ဒီမှာယောက်ျား။ PMO နှင့်ငါ့အိမ်ထောင်ကိုဖျက်ဆီးလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမျိုးသမီးတိုင်းသည်အောက်ပါတို့ကိုနားလည်စေလိုသည်။ သင်ပိုကောင်းတဲ့စိတ် ကိုယ့်ကြောင်းအားဖြင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုသင်အပေါ်လိမ်လည်လှည့်မခံထိုက်ပါတယ်။ လိင်မှုကိစ္စတွင်ပါ ၀ င်သောအခြားသူများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်ဖောက်ပြန်မှုပုံစံတစ်မျိုးမဟုတ်ကြောင်းမည်သူမဆိုမည်သို့ထင်မြင်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာမင်းကငါ့အတွက်မလုံလောက်ဘူးလို့မရည်ရွယ်ဘဲပြောခဲ့တယ်။ အဘယ်သူမျှစစ်မှန်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးနှင့်ရရှိနိုင်သော porn နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါ။ ပြီးတော့မင်းလုပ်စရာမလိုဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်ကတိက ၀ တ်ပြုမှုရှိသောဆက်ဆံရေးရှိပါကသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏တစ်ခုတည်းသောလိင်ဆန္ဒကိုမျှော်လင့်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်ဇနီးအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်လာသည် သူမငါ့ကိုဖမ်းမိသောအခါသူမမျက်နှာပေါ်တွင်ရွံရှာဖွယ်နှင့်သစ္စာဖောက်ပုံကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါ။ ကိုယ့် SO ရဲ့ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုကိုလက်ခံတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကြားတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်ဖတ်မိတဲ့အခါကြောက်လန့်တုန်လှုပ်မိတယ်ဆိုတာရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ခံယူထားတယ်။ porn ကိုကြည့်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကယောက်ျားတွေကိုမိန်းမတွေကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်ကွက်ဖို့နဲ့ကျန်းမာတဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုတာငါတို့ရဲ့အမြင်ကိုလွဲမှားအောင်သင်ပေးဖို့ပဲ။ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကျန်းမာသောလိင်ဆက်ဆံမှုရှိရန်စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးစေသည်။ သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် porn ကိုအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့သင်ကအဆင်မပြေဘူးလို့ခံစားခွင့်ရှိတယ်။ တနည်းကား, သင်သာ။ ကောင်း၏ဒီဇိုင်း! သင်နှင့်သင်သာလိုချင်သောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး ကိုထိုက်တန်သည်။ သူကသင့်ကိုရင်သားနှင့်ယောနိမစုံလင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်လိုလားသည်။
လိင်မှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ သာ. နှစ်သက် IMO porn တစ်နေဖြင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ / လွန်းလိင်သို့မဟုတ်ဖြစ်သင့်သောအရာကိုတစ်ဦးအမြင်နှင့်လုပ်ရပ်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကွန်နက်ရှင်ပုံပျက်။ ငါရပ်တန့်မဖြစ်မှီငါသည်အဘယ်ကြောင်းဆက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်မရဲ့ဇနီးဟောင်းနှင့်အတူလိင်ရှောင်ရှားရန်တစ်ဦးရန်ပွဲကောက်မယ်လို့ရှိရာအမှတ်ရတယ်။ ဒါဟာအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှမဖတ်ရှုဖို့, တစ်နှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွာရှင်းပြီးနောက်ယခုကယ့်ကိုဝမ်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးထောက်ခံမှုယောက်ျားတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! DE နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါမကြာခဏ post မထားဘူး, ဒါကြောင့်ငါပြန်ကြားချက်လောက၏အကြောင်းကိုသေချာမသိဘူး။ ငါပို့စ်အားလုံးအားပြန်ပြောရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ငါယခုငါဖြစ်ကြောင်းကိုအဆင့်အထိ (ဘယ်လိုငါအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမရ) ဘယ်လိုတယ်ဘယ်လိုနောက်ထပ်အကြံပေးချက်များနှင့်အချက်အလက်များကိုထားလိမ့်မယ်။
နေ့ ၁-၃၀ ကနေငရဲမှာမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် shit လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဆက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုသည့်အရာတစ်ခုမှာသင်၏ခံစားချက်အားလုံးနှင့်သင်၏ခရီးစဉ်အတွင်းသင်လေ့လာသိရှိခဲ့ရာများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်တစ်ခုမှာ sexy pics ect အပါအဝင် p နှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ Facebook ပေါ်ရှိ sexy အုပ်စုများကို 'hot chicks' သို့မဟုတ် 'olympic hunting' များမနှစ်သက်ကြောင်းသေချာစေပါ၊ ၎င်းသည်သွေးဆောင်မှုကိုရပ်တန့်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်ကကြက်မကင်ဓါတ်ပုံတွေကိုဆက်မသွားဖို့သတိပြုပါ၊ အကယ်၍ မင်းကလိင်မြင်ကွင်းတစ်ခုနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်သင်မကြည့်ရဲဘူး၊ ဒါကငါ့ထင်မြင်ချက်အတိုင်း P လိုပဲအတုအယောင်ပဲ။
Ouibiensur ကိုငါသဘောတူတယ်၊ fap မရှိရင်မင်းကိုရည်းစားတစ်ယောက်ထားပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ပြproblemနာမရှိဘဲအခြားယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်အတူ EVEN ကစားကွင်းပေါ်တွင်မည်သည့် fap ကမျှသင့်ကိုမထားနိုင်ပါ။ (ကိုယ့်ကြုံတွေ့သောအရာကိုမှ) ။
သိကောင်းစရာများ - လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ကြိုတင်ပြီးတင်ကြိုပြောနေစဉ်မှာကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့လို့မထနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အကြှနျုပျ၏အစွန်အဖျား, အလွန်နက်ရှိုင်းစွာနှင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းအသက်ရှု။ ဒါကငါ့အာရုံကြောတွေနဲ့အကူအညီပေးခဲ့တယ်။ နောက်ထပ်အစွန်အဖျားကမင်းရဲ့မိန်းကလေးကိုဘောင်းဘီရှည်ရှည်နဲ့ဖုံးအုပ်ပေးပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းသူမအပေါ်စပါးကြိတ်လာသည်။ သင့်ရဲ့တစ်ဝက်ကိုစိုက်ထူရင်တောင်သူမရဲ့အမျိုးသမီးအစိတ်အပိုင်းတွေကိုဖိအားပေးဖို့ကလုံလုံလောက်လောက်ရှိသင့်တယ်။ သူမစိတ်လှုပ်ရှားလာရင်ငါ့ကိုယုံပါ။ ဘယ်အချိန်မှာသင်တက်ရုံပျော်မွေ့။ အကယ်၍ သင်သည်ပထမဆုံးရက်စွဲတွင်သင်နှင့်၎င်းကိုမထနိုင်လျှင်စိတ်ဖိစီးမှုမပြုပါနှင့်။ မင်းမှာ“ ပထမဆုံးနေ့စွဲမှာမနမ်း” ရဆိုတဲ့စည်းကမ်းရှိတယ်လို့သူ့ကိုပြောပါ။ ဒါကယာယီပဲ။ ငါသိပေမယ့်မင်းကိုသူနဲ့သိကျွမ်းဖို့နဲ့အဲဒီအာရုံကြောတွေဆုံးရှုံးဖို့အချိန်အလုံအလောက်ပေးလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတော့အရှုံးမပေးနဲ့။ သငျသညျယောက်ျားတွေ, သောသူတို့သည်ပိုကောင်း, သင် porn မလိုအပ်ပါဘူး, ကိုယ့်တော့ဘူးစဉ်းစားကြဘူး! ကိုယ့်ကိုကိုယ်တကယ်လိင်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာယနေ့ငါပျော်ရွှင်စွာနဲ့နီးပါးငိုခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ GF ကကျွန်ုပ်ကို 'ငါလမ်းလျှောက်လို့မရဘူး၊ မင်းကိုမုန်းတယ်' ဟုငါ့ကိုစာပို့ခဲ့သည်။ ပြီးတော့ကိုယ့်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါထူးဆန်းတဲ့ fetishes နှင့်မကောင်းသော ED ပြissuesနာများနှင့်အတူ PMO နှင့်အတူမကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတွန်းထုတ်ပြီးအဲဒါကိုတန်ဘိုးရှိခဲ့တယ်။ ယောက်ျားတွေကိုတိုက်ခိုက်နေပါ။ သင်ဤရိုက်နှက်နိုင်သည် !!!
PS ။ ကိုယ်အမှန်တကယ် faping ခဲ့အိပ်မက်မက်ဘယ်မှာငါစောစောပေါ်တဦးတည်းစိုစွတ်သောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်။ ဒါဟာငါ့ကို infuriated, ငါ့မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက် (ကဖြစ်ရသော) porn ဘို့ကြိုးခံခဲ့ရလျှင်သကဲ့သို့ငါ့ကိုခံစားရဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကသတငျးကောငျးဤအချိန်ကျော်တတ်, နှင့်သင်အမှန်တကယ်ဘဝငှာကွိမျအစား porn အကြောင်းကို sexy အိပ်မက်ရှိသည်ဖို့စတင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာ porn စွဲလမ်းခဲ့ကြသည်။ အစဉ်မပြတ်ငါ့ပြproblemနာကိုငါသိ၏။ ငါရပ်တန့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လည်းအလိုတော်မရှိခဲ့ဘူးပေမယ့်ဒီနေ့ပြောင်းလဲသွားတယ်။ ငါသွားတဲ့ဒီအသိုင်းအဝိုင်းဟာငါ့အတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုနှင့်တူသည်။
လူမှုရေးပြဿနာများရှိခြင်းမဟုတ်ပေမယ့်ကိုယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါကျကှဲခွငျးပြဿနာများရှိခဲ့ကြပြီးကိုယ့်ဟာညစ်ညမ်း ပို. ပင်သူတို့အားပေါကျကှဲခွငျး enabled မူကြောင်းကိုယခုမြင်ရကြ၏။ ဒါ့အပြင်ဘေးထွက် bar မှာဗီဒီယို ပို. ပင်ကြှနျုပျပြဿနာပြသခဲ့သည်။
ငါ cum မကျင့်မိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်။ ဒါဟာလိင်စဉ်အတွင်း orgasm နီးပါးနှစ်နှစ်ငါ့ကို ယူ. ငါအဘယ်ကြောင့်ယခုတိုင်အောင်သိတယ်ဘယ်တော့မှမ။
porn သည်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုအစားလိင်သည်ပုံသေနည်းတစ်ခုအထိကျွန်ုပ်၏စိတ်ကိုထိမိစေခဲ့သည်။ ငါသူတို့ porn မှာပြုသကဲ့သို့thingsုံသောအရာတို့ကိုလုပ်ဖို့ရှိသည်သို့မဟုတ်ငါအလုံအလောက်မကောင်းဖြစ်၏။ သို့သော်လည်းငါသည်ထိုရပ်တန့်ချင်တယ်။ ငါကအားလုံးကိုရပ်တန့်စေချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆန္ဒများကိုကျွန်အဖြစ်ခံခြင်းဖြစ်သည်။ ငါညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ကျွန်ဖြစ်ခြင်းပြုမိပါတယ်။ ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုတ်ညံ့ပြုမိပါတယ် ဒီနေ့ဟာအခန်းအသစ်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့ပဲ။ ငါသည်သင်တို့၏ကြွေးမြီ NoFap ၌ရှိ၏။ ငါဒီနေ့အထိနုတ်ထွက်ဖို့အလိုမရှိဘူး။ အဆိုပါ Fapstronauts လုပ်နေတာရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒီလူတွေနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်များ၏အကြောင်းရင်းဟာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုရပ်တန့် porn နှင့် gentler lovemaking မှတဆင့်ပြန်သာမန် sensitivity ကိုမှ bounce ဖို့လိုကြောင်းမှန်လျှင်, ထိုဥာဏ်ကိုသော့နှင့်နှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆုံး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုငြိမ်းစေလျက်ရန်သော့ချက်အဖြစ်အများကြီးအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုလက်ပတ်နာရီများအတွက် Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့် Porn သို့မဟုတ်ကိုဖတ်ရှု ငါ၏အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်သောငါ၏အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) လား?.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု: porn အလွဲသုံးစားလုပ်၏မြင့်တက်စျေးနှုန်း